10/30/13 ~ Myanmar Forward
ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်းအတွက် ဂျာမဏီက ယူထားသည့် အကြွေးပြန်ဆပ်ရမည်
Posted by drmyochit Wednesday, October 30, 2013, under သတင်းများ | No comments
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်ကတည်းက ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်း စီမံကိန်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက အနောက် ဂျာ မနီဆီကနေ ချေးယူထားတဲ့ ဂျာမနီမတ်ငွေ ၁၇ သန်းထဲက ငွေတွေ ပြန်ဆပ်ရဖို့ ကျန်ရှိနေတယ်လို့ သတ္တုနဲ့ သယံဇာတရေးရာ လွှတ်တော်ကော်မတီက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မဆလ အစိုးရလက်ထက် ၁၉၇၄ ခုနှစ်ကတည်းက ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်း စီမံကိန်းအတွက် ချေးထားတဲ့ငွေတွေကို ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အခုမှ ပဲရစ်ကလပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို ပြန်ဆပ်ဖို့ သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနက တောင်းခံလာတဲ့အပေါ် မေးမြန်းရာကနေ ဒီကိစ္စ သိရှိတာလို့ သတ္တုနဲ့ သယံဇာတရေးရာ လွှတ်တော်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးလှဆွေက ပြောပါတယ်။
“အစတုန်းက မဆပ်ဘူး။ အခုမှ ဘာလို့ ဆပ်တာလဲလို့ မသိလို့မေးတာ။ မေးတော့ သူတို့က အခုမှ ဆပ်ခိုင်းတာပါတဲ့။ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ ကျန်တာလေးပဲ ဆပ်ရတော့မှာပေါ့။ အတိုးက ဒီလောက်ပေါ့။ အရင်းက ဒီလောက်ပေါ့။ အခုတော့ ယူရိုငွေနဲ့ ပြန်ပြီး မတ်ငွေကို ချိန်းရတာပေါ့။ ချိန်းပြီးတော့ မြန်မာငွေနဲ့ တန်ဖိုးတွက်တာ ၂၀၃ သန်း။”
တနင်္သာရီတိုင် ထားဝယ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်း စီမံကိန်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ဂျာမနီ (ယခင်အနောက်ဂျာမနီနိုင်ငံ) ဆီကနေ ဂျာမန်မတ်ငွေ (၁၇ ဒဿမ ၂၂၀) သန်း ချေးယူထားခဲ့တာပါ။
ဒီချေးငွေထဲက ၄ သန်းခွဲလောက်ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီး ကျန်ငွေ ၁၂ သန်းခွဲလောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ ကျန်နေတယ်လို့လည်း သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနက အတည်ပြုပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တင်ရှိနေတဲ့ အကြွေးထဲက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို မြီရှင်နိုင်ငံက လျှော့ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်လို့ ကျန်တဲ့ မတ်ငွေ ၆ သန်းကျော်ကို ၁၅ နှစ် ကာလအတွင်း ပေးဆပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး မတ်ငွေကို ယူရိုငွေနဲ့ ပြောင်းလဲ တွက်ချက် ပေးဆပ်ရမယ်လို့လည်း ဦးလှဆွေက ပြောပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနကို မေးမြန်းရာမှာတော့ ကြွေးရှိတာ မှန်ကန်သလို လျှော်ပေးထားတာရှိတဲ့အကြောင်း၊ ချေးငွေချေးယူတာကလည်း ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန အစီအစဉ်နဲ့ ရယူထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်ဆပ်ရင်လည်း ဒီဝန်ကြီးဌာန အစီအစဉ်နဲ့ ပြန်ဆပ်မယ်လို့ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။
၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလထဲမှာ မြန်မာက ပဲရစ်ကလပ်ပေါ်မှာ တင်ရှိနေတဲ့ ကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ၁၀.၃၂၇ ဘီလီယံ ထဲကနေ ဒေါ်လာ ၆.၁၉၂ ဘီလီယံကို လျှော်ပေးဖို့ သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီး ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ပဲရစ်ကလပ် ဥက္ကဋ္ဌ အပါအ၀င် ကလပ်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ဆွေးနွေးပြီး အခုလို အကြွေးတွေ လျှော်ပေးဖို့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ အစိုးရ သတင်းစာတွေက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ပဲရစ်ကလပ်မှာ ပြင်သစ်၊ ဖင်လန်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ နော်ဝေ၊ နယ်သာလန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ကနေဒါ၊ ဩစတြီးယားနဲ့ ဂျာမနီစတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ၁၉ နိုင်ငံရှိပါတယ်။
ခေတ်သစ်ကျွန်သဘောက် အမည်ရှိ အလုပ်သမားများ အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေ
Posted by drmyochit Wednesday, October 30, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၃၀။
Labour Rights Clinic (L.R.C) နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ စက်မှုဇုံ (၁၃)ခုမှ လုပ်ငန်းခွင်များသို့ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသော ခေတ်သစ် ကျွန်သဘောက် အမည်ရှိ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန် အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ အခြေအနေ (၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ) ကို Labour Rights Clinic (L.R.C) မှ ထုတ်ဝေ လိုက်သည်။
“ ဒီအစီရင်ခံစာကို ဘာလို့ထုတ်ဝေရတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို အသစ်ဝင်ရောက်လာမယ့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ၊ စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတွေ ရောက်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ စက်မှုဇုံတွေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာ စိန်ခေါ်မှု အသစ်တွေ ရှိလာပါတယ်။ အဲလိုဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ မြန်မာအလုပ်သမားတွေမှာ နဂိုရှိပြီးသား ပြဿနာတွေဟာ နောက်ထပ် အလုံးအရင်းနဲ့ ထပ်ပြီးဖြစ်လာဖို့ ရှိသလို အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘဝနဲ့အခွင့်အရေးတွေကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီလိုအရေးကိစ္စတွေကို အများပြည်သူတွေ အာရုံစိုက်မှု အားနည်းနေပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာကနေ သတင်းပြတ်တောက်မှုတွေကို ဖာထေးပေးပြီး အများပြည်သူတွေ အာရုံစိုက်လာအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာကို အလုပ်သမားအရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေနဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်း အရာတွေ၊ ဘယ်လို အခြေအနေတွေကို အဓိကထားပြီး တင်ပြကြမယ် ဆိုတာကို ဆွေးနွေးပြီးမှ အဆင့်ဆင့်ပြုစုခဲ့တာပါ။ အဓိကအခြေတည်တဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုံတွေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို စစ်တမ်း ကောက်ယူ ထားပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုမှ စုစည်းပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေနဲ့ ရေးဆွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ”ဟု လုပ်သားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ အတိုင်ပင်ခံစင်တာမှ ဦးချစ်ဦးမောင်က ပြောသည်။
ယခုထုတ်ဝေလိုက်သော အစီရင်ခံစာတွင် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံရမှုများ၊ လုပ်အားခ လစာ နည်းပါးမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံရေး အားနည်းမှုများ၊ အလုပ်သမား အသင်းအပင်းများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းခွင့် မရမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းမှုများကို လေ့လာစစ်တမ်း ကောက်ယူထားပြီး ယင်းအစီရင်ခံစာအား အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့သွားမည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်လက်၍ ပြောခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Wednesday, October 30, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ဤဟင်းချိုသည် ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ အာပုပ်နံ့နံသူများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အပူများနေသူများ၊ ချောင်းဆိုးနေသူများအတွက် ထိရောက်စွာ အကျိုးပြုနိုင်သည်။
ကန်စွန်းရွက် (၁) Kg အရိုးကိုပါ အသုံးပြုပါ။
ပျားရည် (၄၀၀) ဂရမ်ရေ (၄)လီတာမျှရေကောင်းကောင်းဆန့်သည့်
အထက်ပါပစ္စည်းများ အားလုံးရော၍ မီးမျှင်းမျှင်းနှင့် (၄) နာရီ ကြာတည်ပါ။
အဖတ်များကို စစ်၍ ပုလင်းထဲ ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် (၂-၃)ရက်ထားပါ။ မိသားစု (၁)ဦးချင်း တစ်နေ့(၁)ခွက်သောက် ရပါမည်။
ကန်စွန်းရွက်ဟင်းချိုသောက်ခြင်းဖြင့် အဆုတ်အတွက် ကောင်းသည်ဟု တရုတ်လူမျိုးများက အထူးသဖြင့် ဓလေ့ရိုးရာအဖြစ် သောက်ကြသည်။
(၁) အဆုတ်အတွင်း အဆိပ်အတောက်များကို စင်ကြယ်သန့်ရှင်းစေသည်။ ဆေးလိပ်သောက်သူများ လေထုညစ်ညမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင် တွင် နေထိုင်သူများအတွက် ကြီးမားသော ကောင်းကျိုးရစေသည်။
(၂)အာပုပ်နံ့နံသူများသည်လည်း ဤဟင်းချိုသောက်ခြင်းက ကုစားစေနိုင်သည်။
(၃)ပူ၍ခြောက်သွေ့သော ရာသီတွင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူများသူများ သောက်ခြင်းဖြင့် အပူငြိမ်းစေသည်။
(၄)အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသဖြင့် ချောင်းဆိုးနေသူများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောဆေးတစ်လက်ဖြစ်သည်။
လုပ်ခ တိုးပေးရန် တိုင်ကွန်း အထည်ချုပ်လုပ်သား ၅၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြ
ဝရန်တာပေါ် ထွက်ထိုင်ပြီး ဆန္ဒပြနေကြသော အလုပ်သမားများကို တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉
ဆန္ဒပြမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် အပိုင်း (၁) ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသား ပိုင်ဆိုင်သည့် တိုင်ကွန်း (Tycoon) အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်သား ၅၀၀ ကျော်သည် အချိန်ပို အလုပ်ချိန်များပြီး လုပ်အားခ နည်းပါးသဖြင့် လုပ်ခ တိုးမြှင့်ပေးရန် အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေကြကြောင်း အဆိုပါ လုပ်သားများထံမှ သိရှိရသည်။
အလုပ်ချိန်အဖြစ် နံနက် ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ ည ၇ နာရီအထိ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရပြီး ပုံမှန်အချိန်ပို အလုပ်ချိန် အဖြစ် ည ၉ နာရီ အထိ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရကြောင်း၊ အော်ဒါအပေါ် မူတည်ကာ တစ်ခါတစ်ရံ ည ၁၁ နာရီ အထိ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရသော်လည်း လုပ်သားတစ်ဦး၏ တစ်လစာ လုပ်အားခမှာ ကျပ်ရှစ်သောင်းသာ ရရှိသဖြင့် လုပ်အားခ တိုးပေးရန် ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြ လုပ်သားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
လုပ်အားခ နေ့စဉ်ကြေးအဖြစ် တစ်ရက်လျှင် ၂၀၀ ကျပ် တိုးပေးရန်၊ ရှားပါး စရိတ် ၅၀၀ ကျပ် တိုးပေးရန်၊ အလုပ်ချိန်ကို နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၇ နာရီ အထိသာ သတ်မှတ်ပေးရန် အပါအဝင် အချက် ခြောက်ချက်ကို တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းတောင်းဆိုချက်များ ရရှိရေး အလုပ်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းရာတွင် လုပ်ခ တိုးရေးနှင့် အလုပ်ချိန် လျှော့ချရေး အချက် သုံးချက်ကို အလုပ်ရှင်က လိုက်လျောခြင်း မရှိသေးကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်း တောင်းဆိုမှုများကို ရရှိရေးအတွက် အငြင်းပွားမှု ညှိနှိုင်း ဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့သို့ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် တင်ပြထားကြောင်း ဆန္ဒပြ လုပ်သားများထံမှ သိရှိရသည်။ အဆိုပါကိ စ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကွန်း အထည်ချုပ်စက်ရုံ မန်နေဂျာထံသို့ လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း အလုပ်မအားသေး၍ ပြန်လည် မဖြေနိုင်သေးကြောင်း စက်ရုံလုံခြုံရေးမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် ပြောဆိုသည်။
တိုင်ကွန်း အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဖွင့်လှစ်ထားသည်မှာ တစ်နှစ်ခန့်သာ ရှိသေးပြီး စက်ရုံလုပ်သား ၆၀၀ ကျော် ရှိသည့်အနက် ၅၀၀ ကျော်က ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသား ၂၆ ဦးကို အစ္စရေး ပြန်လွှတ်
Posted by drmyochit Wednesday, October 30, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အကျဉ်းသား ၂၁ ဦးကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဂျေရုဆလင်မ်အနီး အနောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ အော့ဖ်ဖာအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး မကြာမီပင် နောက်ထပ် အကျဉ်းသား ၅ ဦးကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်
အစ္စရေးအစိုးရသည် ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသား ၂၆ ဦးအား ယနေ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ရေး အမေရိကန်၏ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုရလဒ်အဖြစ် ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများကို အစ္စရေးက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အကျဉ်းသား ၂၁ ဦးကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဂျေရုဆလင်မ်အနီး အနောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ အော့ဖ်ဖာအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး မကြာမီပင် နောက်ထပ် အကျဉ်းသား ၅ ဦးကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း AFP သတင်းက ဖော်ပြသည်။
အစ္စရေးက ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သော အကျဉ်းသားများသည် ဘတ်စ်ကားနှစ်စီးဖြင့် ဂျေရုဆလင်မ်မြောက်ဘက်ရှိ ဘီတူနီယာမြို့သို့ ထွက်ခွာသွားပြီး အဆိုပါမြို့တွင် ၎င်းတို့အား ပါလက်စတိုင်းတို့က မီးရှူးမီးပန်းများ ပစ်ဖောက်ကာ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ရာမာလာမြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာကြပြီး ရာမာလာတွင် ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင် မာမွတ် အဘတ်စ်က အခမ်းအနားဖြင့် ကြိုဆိုမည်ဖြစ်သည်။ ပါလက်စတိုင်း အကျဉ်းသားများအား အစ္စရေးနယ်နမိတ်ကို ဖြတ်သန်းကာ ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေအတွင်း စတင်ရောက်ရှိသည်နှင့် ၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးများနှင့် ဒေသခံတို့က ကြိုဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော အကျဉ်းသား ၂၆ ဦးမှာ အစ္စရေးတို့အား တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် မှုအ တွက် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံထားရခြင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ခိုက်မှုအများစုမှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ် အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စ တိုင်းတို့ကြား ရရှိခဲ့သည့် အော်စလိုသဘောတူညီချက် မတိုင်မီ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့အ လယ်ပိုင်းဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်မစတင်မီ အကြိုညှိနှိုင်းမှုများအရ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နက်တန်ယာဟူက ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသား ၁၀၄ ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် သဘောတူညီထားသည်။ သြဂုတ်လအတွင်းက ပထမဆုံးအသုတ်အဖြစ် ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသား ၂၆ ဦးကို အစ္စရေးက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနှင့်ပါလက်စတိုင်းတို့ကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများမှာ ၃ နှစ်ကြာ ရပ်တန့်နေခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ ကလေး အသေမွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော အမျိုးသမီးများ အစာ မစားချင်သည့် ပြဿနာ
အစာမစားလိုသည့် ပြဿနာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ မိခင်လောင်းများဟာ ကလေးရနိုင်ချေနည်း တဲ့အပြင် မျိုးဆက် ပွားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့လဲ ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ သုတေသနတစ်ရပ်မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
လေ့လာမှုမှာ အစာမစားလိုတဲ့ အခြေအနေ(anorexia)ကိုကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်အစား စားသုံးသူများထက် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ ကလေးအသေမွေးခြင်းစတဲ့ အခြေအနေတွေကိုပိုပြီး ကြုံတွေ့ရ နိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အစာမစားတဲ့ရောဂါ (bulimia) ရောဂါရှင် တွေဟာလဲ ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းမှာ အကျုံးဝင်နေပါတယ်။
လေ့လာမှုခေါင်းဆောင် Helsinki University မှ သုတေသီ Dr Milla Linna က “စောစောစီးစွာ သိရှိခြင်း၊ ထိရောက်တဲ့ကုသမှုတွေဟာ ဒီအစာမစားချင်တဲ့ ပြဿနာကို ကုသနိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းနဲ့ ကလေးအသေမွေးခြင်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်”လို့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုဟာ Helsinki University ရဲ့ သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးကို ၁၉၉၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ခုနှစ်အတွင်း ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခဲ့တဲ့ အစာမစားချင်တဲ့ ရောဂါရှင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းတွေကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး (၁၁၀၀၀)ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အစာမစားလိုတဲ့ပြဿနာ ကြုံတွေ့ ရသူလူနာပေါင်း (၂၂၅၇)ဦး ပါဝင်ပါတယ်။
Dr Milla Linna က “အစာမစားခြင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ ကလေးအသေမွေးခြင်းတွေ ဆက်စပ်နေ တယ်ဆိုတာကိုသာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်”လို့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
တက်တူးနဲ့ဆေးမှင်သာ သေရင်ကိုယ့်နောက် ပါလာမှာလို့ ထင်နေကြသူတွေ
Posted by drmyochit Wednesday, October 30, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားအပေါ်ယံလွှာကို ဖောက်ထွင်း၍ မော်တာတပ်ထားသည့် အပ်ဖျားလေးက တဒီဒီမြည် ကာ ကြိုတင် ရေးခြယ် ထားသည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ပြေးလွှားကစားနေသည်။
ထိုအပ်ဖျားလေးပြေးလွှားနေသည့် အရေပြားပိုင်ရှင်မှာ အသက် ၂၂ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိ လူငယ်ကတော့ တစ်ချက်လေး မှ ညည်းငြူသံမထွက်ပဲ တစ်ချက်တစ်ချက်တွန့် သွားယုံမှလွဲ၍ သင်ဖြူးဖြာပေါ်တွင် မှောက် လျက်...
ခံစားနေရသည့် နာကျင်မှုကိုကြိတ်မှိတ်ထားရ၍ပဲလား သောက်ထားသည့် ယမကာရှိန်ကြောင့်လား မသိ အံကြိတ် ထားသည့် မျက်နှာကတော့ အပ်ဖျားဝင်သွားသည့်လမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှ သွေးရောင်များကဲ့သို့ နီနီရဲရဲဖြစ်၍ နေပေသည်။
ခံသည့်လူကခံနေသလို (ဆေး)ဆွဲပေးသူကလည်း အပ်ဖျားလေးအား အ၀တ်စနှင့်သုတ်လိုက် အရေပြားမှ သွေးများကို သုတ် လိုက်နှင့် သူ့တာဝန်သူထမ်းဆောင်နေကြသည်။
အနီးနားတစ်ဝိုက်က ပုံစံမျိုးစုံပါသည့် ဆေးရောင်ခြယ် စာအုပ်များ၊ စာရွက်များအား ကြည့်ရှုနေသည့် လူငယ်တစ်သိုက်ကလည်း ဒီပုံလန်းတယ် ဟိုပုံလန်းတယ်နှင့် စည်စည်ကားကား.....
ဒါကတော့ ယခုခတ်လူငယ်များ၏ တက်တူး(Tattoo) (ခေါ်) ဆေးမင်ကြောင်ထိုးပွဲ အသေးစား မြင်ကွင်းအချို့ပင်...
လုပ်ငန်းကြေးသွင်းစရာ မလို၊ ဘယ်ဌာနကိုမှ လျှောက်လွှာ တင်စရာမလို၊ လိုင်းကြေး ပေးစရာမလို၊ အရင်းအနှီး များများ စားစားမလို၊ အလုပ်သင်သင်တန်း တက်ရောက်ဖို့မလို၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ကြောင်း ထောက်ခံစာမလို...
သို့သော် လုပ်ငန်းသေးနှင့်လုပ်ငန်းကြီး လက်ရာ၊ဈေးနှုန်းနှင့် ဒီဇိုင်းဆန်းပုံသာကွာသွားမည် မြို့တိုင်းလိုလို နယ်တိုင်းလိုလိုပင် အခကြေးငွေယူကာ တက်တူးရေးဆွဲပေးသူများမှာ တနေ့တခြားများပြားနေသည်ကို လူငယ်များ၏ ခန္တာကိုယ်များမှတဆင့် မြင့်တွေ့နေရသည်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တိုင်းမှ အရွယ်ရောက် အရွယ်ကောင်းလူငယ်လေးများမှအစ အရွယ်လွန် အမျိုးသားကြီးအထိ (အချို့အမျိုးသမီးများ အပါအ၀င်) အနည်းနှင့် အများဆိုသလို တက်တူးကိုယ်စီနှင့် ဟန်ရေးကြွယ်နေကြပြီ။
အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဆိုလျင် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းသို့လျောက်ထားရာ၌ တချိန်က ထိုးခဲ့သည့် နှင်းဆီပွင့်ပုံကြောင့် ဗိုလ်လောင်း ဘ၀ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရဘူးကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှကြားသိရသည်။
ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ ကြော်ငြာမင်းသား၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသား၊ အဆိုတော် မော်ဒယ်လ်မှအစ သင်္ကန်းဝတ်အချို့နှင့် တက္ကစီသမား၊ ဆိုက္ကားသမား၊ စားပွဲထိုးနှင့်လမ်းသူရဲမကျန် တက်တူးကိုယ်စီဖြင့် မြင်တွေ့ရသည်မှာလည်း ခေတ်စတိုင်လ်တစ်ခုပင် ဖြစ်၍ လာ ပေတော့သည်။
ကျွန်တော့် အသက်(၁၉) နှစ်ခန့်က ခင်မင်ခဲ့ဖူးသည့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပင် သတိရမိသေးသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့ရှိ ရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း၏ ပွဲတော်တစ်ခုသို့ထိုသူငယ်ချင်း အပါအ၀င် သူငယ်ချင်း တစ်ချို့နှင့် ပွဲလည် သွားကြရင်း ပွဲဈေးတန်းထဲတွင် ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ဖြင့် တက်တူးရုပ်များ ရေးထိုးပေးသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှေ့ရောက်တော့ သူငယ်အချင်းအချို့၏ မြှောက်ပင့်စကားကြောင့် သူက တက်တူးရေးထိုးသူကို စာတစ်ကြောင်း ရေးခိုင်းသည်။
ပိန်ကပ်ကပ်သူ့ရင်ဘတ်ညာဖက်မှ ဘယ်ဖက်သို့ “သေမင်းကို စိန်ခေါ်သည်” ဆိုသည့် စာတန်းအား မကြောက်မရွံ့ ရေးထိုး ခဲ့သဖြင့် သတ္တိရှိကြောင်း မြှောက်ပင့်ပြောဆိုသူများရှိသလို ကြောက်ရွံ့ကန့်ကွက်သူများလည်း ထိုစဉ်က ရှိခဲ့သည်။
အပြုအမူအပြီး နှစ်ပိုင်းလောက်သာ ကြာသည်၊ ထိုသူငယ်ချင်း၏ မိခင်မှာ လူကြီးရောဂါတစ်ခုဖြင့် ရုတ်ချည်း ကွယ်လွန်သွား လေသည်။
သေမင်းကိုစိန်ခေါ်မိ၍များ သေမင်းက ပြန်လည်စိန်ခေါ်လိုက်သလားဟု မဆီမဆိုင် ကျွန်တော်တွေးမိသေးသည်။ ယခုတော့ သူလည်း ထိုစာတန်းကို အရုပ်တစ်ခုဖြင့် ဖုံးလိုက်သည်။
တက်တူးဆိုသည့်အရာက လူခန္တာကိုယ် အရေပြားပေါ်တွင် နေရာယူလာသည်မှာ ယခုမှစသည် မဟုတ်သော်လည်း မျက်စိ နောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပေါများလာတာတော့ တွေ့နေရသည်။ လွတ်လပ်လာသည့် ခေတ်ကာလနှင့် အဆန်းထွင် လာကြသည့် လူ့သဘာဝတို့စခန်းထလာသည့် မကြာသေးသည့်နှစ်အချို့က စခဲ့သည်ဟုသာ ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆ ရမည်.... ပြောကြသူတစ်ချို့ကတော့ ပြောကြသည် “ယောက်ျားမှန်ရင် တက်တူးရှိရမယ်” ဆိုပဲ.....
မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ငွေကုန်ကြေးကျခံကာ အသားအနာခံပြီး တစ်လွဲသတ္တိပြချင်သူ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူအချို့၏ စကားကြောင့် ခန္တာကိုယ်အရေပြားတွင် တက်တူးမထားသည့် ယောက်ျားသားများမှာ ဘ၀ပြောင်း ပေးရတော့ မလို။
ဗဟုသုတအတော်အတန်ရှိသူ တစ်ချို့ကလည်း ဆေးမှင်ကြောင်(ထိုးကွင်းမှင်ကြောင်) ဆိုသည်မှာ ရှေးခေတ်မြန်မာအမျိုးသား တိုင်းလိုလိုရှိခဲ့ကြလို့ပဲ ရိုးရာမပျက်အောင်လိုက်လုပ်ကြရသလိုလို.... ဂုဏ်ယူရတော့မည့်အသွင်ဖြင့် ပြောဆိုတတ်သေးသည်။
ရှိခဲ့တာတော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မည်၊ ဘယ်သူစခဲ့သည်လည်းတော့မသိ
အရပ်အမောင်းကောင်းကောင်း၊ သျှောင်တစ်စောင်း ခါးတောင်းမြောင်အောင်ကြိုက်ထားသည့် ယောက်ျားပီသ သော ရှေးခေတ် မြန်မာအမျိုးသားကြီးများ၏ ကြွက်သား အမြောင်းမြောင်းနှင့် ခန္တာကိုယ်တွင် ထိုးကွင်းမှင်ကြောင်ကြီးများဖြင့် ခန့်ခန့်ညားညား ရှိခဲ့ဖူးသည်မှာဖြစ်နိုင်သော်လည်း ထိုခေတ်ကတော့ တွေ့ရာမှင် တွေ့ရာအပ်ဖြင့် တွေ့ရာဒီဇိုင်းများဖန်တီးကာ ကြောင်ကြောင် ကြားကြားရုပ်ပုံများကို ကြွက်သားမရှိသည့် ပိန်သေးပိန်ညှောင် လက်မောင်း၊ ခြေသလုံး၊ လက်ဖျံများနှင့် လည်ပင်း ဂုတ်ပိုး ရင်ညွန့်ထက်တွင် မြင်လေသူတိုင်း မျက်စိနောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် လူ့မြင်ကွင်းထုတ် စတိုင်လုပ်ခဲ့ကြမည်တော့ ဟုတ်မည်မထင်။
တစ်ချိန်ကမြန်မာအမျိုးသားများ၏ ယောက်ျားပီသသော ခန္တာကိုယ်တွင် ဆေးမှင်ထိုးခဲ့ကြသည်ဟု ပြော၍ ရနိုင်သော်လည်း ယခုခေတ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ခြင်း တူမည် မဟုတ်သလို ထိုခေတ်ထိုအခါကလည်း မျက်မှောက်ခေတ်ကြီးလို အမည်ဆန်းပြား သည့် ကူးစက်ရောဂါတွေ တစ်ပုံတစ်ထွေးကြီးလည်း ရှိမည်မထင်။
ဖတ်ခဲ့ဖူးသလောက် Tattoo ဆိုသည့် ဝေါဟာရ၏ အနီးစပ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်မှာ (Ta ) ဆိုသည့် (Polynesian) သင်္ကေတေ (တစ်စုံတစ်ခုဖြင့် ထုရိုက်ခြင်း) နှင့် Tatau ဆိုသည့် (Tahitian ) သင်္ကေတ (အမှတ်အသား တစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ရန် )တို့ ပေါင်းစပ်ထားသည့် (လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ခန့်မှ) သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် အမှတ်အသားပြု လုပ်ရန် ထုရိုက်ခြင်းဟုပင် ဆိုလိုရပေမည်။
ယခုတော့ အသားအနာခံ ငွေကုန်ခံကာ ဒီဇိုင်းဆန်းဖြင့် ရောဂါဝယ်ယူသူများ၏ လက်ဝယ် တတ်တူးရုပ်ကလေးများမှာ မှိုလိုပေါက်နေရသည့် ဘ၀သို့ရောက်၍နေရပြီ။
ပညာဥာဏ်ကြီးမားသူများက ဆိုခဲ့သည့် “ရေဘူးနှင့် ဖိနပ်မပါ၊ နွေခါမှသိ။ ဒါနနှင့် သီလမပါ၊ သေခါမှသိ ” ဆိုသည့် “ ရခဲ လှသည့်လူ့ဘ၀တွင် ရေပွက်ပမာ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ချိန် ခဏလေးအတွင်း ဒါန သီလ ဘာဝနာ များရရှိနိုင်စေရန် သတိမပြတ် ကောင်းမှုပြုသင့်ကြောင်း ” ဆုံးမစကားသည်ပင်... ခေတ်ကာလ တစ်လွဲဆံပင်ကောင်းလေးများ၏ ပါးစပ်ဖျား၌..... ပြောင်းလဲသွားပေပြီ.............
လူဆိုတာသေမျိုးချည်းပဲမို့ သေတော့ သေကြရမှာပဲ၊ ဘယ်လောက်ချမ်းသာ ချမ်းသာ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲဆင်းရဲ သေသွားတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့အတူ ဘာမှယူမသွားနိုင်ဘူး...
“တက်တူးနဲ့ ဆေးမှင်သာ သေရင် ကိုယ့်နောက်ပါလာမှာ”...တဲ့...
နဂါး-ဂဠုန်-သိန်းငှက်-စွန်ရဲနှင့် မုဆိုးကျားထမ်း(ဟန်) ဗရမ်းဗတာ(ပရမ်းပတာ)ပုံများနှင့် တိရိစ္ဆာန်ပေါင်းစုံတို့၏ ရုပ်ပုံများ၊ ဘီလူး-မိန်းမ-သိုင်းသမားနှင့်ကင်းမြီးကောက်-မြွေ-တာက်တဲ့လည်း မနေနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆန်းပုံဆန်း စတိုင်ဆန်းဖြင့် လန်းလိုသူများအဖို့ တရားစကားကိုပင် မဟားဒယားပြောင်းလိုက်ကြပေပြီ........
ကျွန်တော်ကတော့ နောင်တစ်ချိန်အနာဂါတ်၏ခေါင်းဆောင်(ဖြစ်လာနိုင်သည့်)လူငယ်များကို ရေဗူးနှင့်ဖိနပ်မပါပဲ နွေအခါတွင် မလျှောက်စေချင်သလို၊ ဒါနနဲ့သီလမပါဘဲလည်း သေရွာသို့ မရောက်စေလိုပါ..........
သို့သော်လည်း စတန့်ထွင်သူ လူအချို့ကတော့ ဒီဇိုင်းဆန်းဖြင့် ရောဂါဝယ်ကာ.. သေရင်ကိုယ့်နောက် ကောက်ကောက် ပါမည်ထင်သည့် အရာများနှင့် ကြွားလုံးထုတ် စတိုင်လ်လုပ်နေဆဲ..............
BY နေဖြိုးမြင့်/ မြစ်မခ
ငိုပြရမည့်အစား အဝတ်အစားများသာ ချွတ်ပြလိုက်မည့် မိုင်လီ
Posted by drmyochit Wednesday, October 30, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
သူမက မိမိ၏ အားနည်းသိမ်ငယ်မှုကို လူအများရှေ့ ထုတ်ပြနေရခြင်းထက် အဝတ်ဗလာဖြင့် ထွက်ပြလိုက်ရခြင်းကို ပိုမို၍ ယုံကြည်ချက် ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်
မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်က သူမအနေဖြင့် ကိုယ်ရေး ဒုက္ခများကို လူအများရှေ့ ဖွင့်ဟပြောပြီး ငိုကြွေးနေရမည့်အစား အဝတ်အစားများသာ ချွတ်ပြလိုက်မည်ဟု ပြောဆိုလိုက်သည်။ သူမက မိမိ၏ အားနည်းသိမ်ငယ်မှုကို လူအများရှေ့ ထုတ်ပြနေရခြင်းထက် အဝတ်ဗလာဖြင့် ထွက်ပြလိုက်ရခြင်းကို ပိုမို၍ ယုံကြည်ချက် ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမက ကင်မရာရှေ့တွင် ဗလာကျင်း မတ်တပ်ရပ်ပြရခြင်းထက် လူသနားအောင် လုပ်ပြရခြင်းက ပိုခက်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ "ကျွန်မအတွက်တော့ အဝတ်မပါဘဲ ရပ်တည်ရတာဟာ ပြဿနာ အကြီးကြီး တစ်ခုလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ဘူး။ ပြီးတော့ လူတွေက အမျိုးမျိုးတွေး၊ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်နေတယ် ဆိုရင်တောင် ကျွန်မရဲ့စိတ်နဲ့ ထပ်တူကျမကျ လိုက်တိုင်းတာမနေဘူး"ဟု မိုင်လီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
သူမက "ကျွန်မရွေးချယ်မှု အရတော့ လူတွေရှေ့မှာ သနားစရာကောင်းအောင် ထွက်ငိုပြရတာနဲ့စာရင် အေးအေးလူလူပဲ အဝတ်အစားအားလုံး ချွတ်ပြလိုက်ချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ထုတ်ပြရတာထက်စာရင် ကျွန်မအတွက်က ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုယ် ထုတ်ပြရတာက ပိုခက်နေလို့ပဲ"ဟုလည်း ပြောဆိုသွားသည်။ အသက်(၂၀) အရွယ်ရှိ မိုင်လီက VEVOနှင့် အင်တာဗျူးတွင် "မျက်ရည်ဆိုတာ အတုလုပ်လို့ရတယ်။ အားလုံးက အတုလုပ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ မလုပ်ချင်ဘူး။ လူတစ်ယောက်ဟာ မျက်လုံးကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ရင် သူပြောနေတာ တကယ်လား၊ ဟန်ဆောင်လားဆိုတာ ညာလို့မရဘူးလေ"ဟုလည်း မှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်သို့ SMS ပို့ခြင်းနှင့် ဖုန်းပြောခြင်းများ ပြုနိုင်တော့မည်
ရန်ကုန် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၉
ပြည် တွင်းမှ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၂၂ဝကို SMS (စာတို)စနစ် ပေးပို့ခြင်းနှင့် ဖုန်းပြောဆိုခြင်းများ လုပ်ဆောင် နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ ယင်းစနစ်ကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ယခုနှစ်အတွင်းအသုံး ပြုနိုင် ရန် စီ စဉ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ပ နိုင်ငံများသာမက ပြည်တွင်းအ ချင်းချင်းပါ သုံးစွဲနိုင်ရန်ဆောင် ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း SMS တစ်စောင်ပေးပို့ခြင်းကို ကျပ်၃၀၊ ပြည်ပနိုင်ငံများကို ကျပ် ၅ဝသတ်မှတ်ထားပြီး ဖုန်းခေါ်ဆို ခြင်းကို မူ နိုင်ငံ အလိုက် ဈေးနှုန်း ကွာခြားမှုရှိသည်ဟု သိရသည်။
''ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ဖုန်း ခေါ်လို့ရမယ်။ အက်စ်အမ်အက်စ် ပို့လို့ရမယ်။ ပုံစံကတော့ Skype လိုမျိုးပါ။ ပြည်ပခေါ်ဆိုခကိုတော့ အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ်ထားတာ မျိုးပဲရှိသေးတယ်။ ဥပမာ- စင် ကာပူနိုင်ငံဆိုရင် တစ်မိနစ်ရှစ်ကျပ် လောက်ပေါ့။ လိုင်းကောင်း ဖို့အ တွက်ကိုတော့ အဓိကပြင်ဆင် ထားတယ်''ဟု Myan Pay မှ တာ ဝန်ရှိသူ ဦးရန်နောင်စိုးက ပြော သည်။
အဆိုပါ စနစ်အား အသုံး ပြုနိုင်ရန်အတွက် အွန်လိုင်းတွင် စာရင်းပေးသွင်းထားရန် လိုအပ် ပြီး Myan Pay မှ ငွေဖြည့်ကတ် များကိုဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ကာ ကျပ် ၁၀၀၀၊ ကျပ်၂ဝဝဝနှင့် ကျပ်၅၀၀၀ အသီးသီး သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကိုယ်ပိုင်အလင်း ရှာဖွေထားရသည့် မြို့ကလေး
မြို့၏ တည်နေပုံ အနေအထားက တောင်စောင်းများ ပတ်လည် ဝန်းရံထားပြီး နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်မှု အလွန်နည်းသည်
နော်ဝေးနိုင်ငံမှ မြို့ငယ်လေး တစ်ခုဖြစ်သည့် ရက်ဂ်ျကူကန်သည် ပထဝီ အနေအထားအရ ထူးထူးခြားခြား တည်ရှိနေသည့် အလင်းပျောက် ရပ်ဝန်းလေး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း မြို့သူ မြို့သားများက ကိုယ်ပိုင် အလင်းကို ခေတ်မီ နည်းပညာများဖြင့် ရှာဖွေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရက်ဂ်ျကူကန်သည် မြို့တော် အော်စလိုမှ အနောက်ဘက် ကီလိုမီတာ (၁၆၀) အကွာတွင် တည်ရှိပြီး လူဦးရေ (၃၅၀၀)မျှသာ နေထိုင်သည်။ မြို့၏ တည်နေပုံ အနေအထားက တောင်စောင်းများ ပတ်လည် ဝန်းရံထားပြီး နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်မှု အလွန်နည်းသည်။ တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ရက်ဂ်ျကူကန်တွင် နေရောင်ခြည်ကို ထိတွေ့ခွင့်မှာ (၆)လထက်ပင် လျော့နည်းနေသေးသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ရက်ဂ်ျကူကန် မြို့လေး၏ တာဝန်ရှိသူများသည် နေရောင်ခြည်ကို အလင်းပြန် နိယာမဖြင့် ခံယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
မြို့အနီးရှိ တောင်စောင်းများပေါ်တွင် ကြီးမားသည့် မှန်ကြီး(၃)ချပ်ကို နေရာချ တပ်ဆင်လိုက်သည်။ ယင်းတို့၏ နောက်ဘက်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဝင်ရိုးကို ကွန်ပျူတာဖြင့် ချိန်တွယ် ပြောင်းလဲနိုင်အောင် အရှင်ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုမှန်ပြားကြီးများသည် နေရောင်ခြည်ကို ခံယူကာ မြို့လယ်ရှိ ရင်ပြင်ပေါ် ကျရောက်စေသည်။ ထို့ကြောင့် မြို့လယ်တွင် စတုရန်းမီတာ (၆၀၀)မျှ ရှိနေသည့် နေရောင်ခြည် ကျရောက်မှုကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ခံယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဆောင်းတွင်းနှင့် ဆောင်းဦးပေါက်များတွင် ယခုနေရောင်ခြည် ကျရောက်မှုက မြို့သားများအတွက် လက်ဆောင်မွန် တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာသည်။
"ကျွန်မတို့ကတော့ ဒါဟာ မြို့လေးရဲ့ လှုပ်ရှား နိုးကြားမှု တစ်ခုလို့ ယူဆပါတယ်။ ဆောင်းဦးနဲ့ ဆောင်းတွင်းတွေမှာ အများကြီး ပိုအသုံးဝင်တယ်။ ပြီးတော့ လူတွေလည်း အိမ်အပြင်ဘက်ကို ပိုပြီး ထွက်ဖြစ်ကြတယ်လေ"ဟု မြို့လေး၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဌာန အကြီးအကဲ ကာရင်ရို့စ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုမှန်ချပ်ကြီးများသည် နေ၏ ရွေ့လျားမှု လမ်းကြောင်းကို အာရုံခံကာ လိုက်လံ မျက်နှာမူနိုင်အောင် ကွန်ပျူတာဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ယင်းတို့၏ အလုပ်လုပ်ပုံသည် နေကြာပန်းများ၏ သဘာဝနှင့်ပင် ဆင်တူနေသည်။
အလင်းပြန် နိယာမဖြင့် မြို့ပေါ်သို့ နေရောင်ခြည် ကျရောက်စေရန် နည်းလမ်းကို မြို့အား စတင်ထူထောင်သူနှင့် စက်မှုပညာရှင် ဆမ်အိုင်ဒီက လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ခန့် ကတည်းက စတင် စဉ်းစားခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော်လည်း လုံလောက်သည့် နည်းပညာ တိုးတက်မှုမျိုး မရှိခဲ့သေးချေ။ (၁၉၂၈)ခုနှစ်တွင်မူ မြို့ခံများ နေရောင်ခြည် ခံယူနိုင်ရန် ကြိုးတန်း ကေဘယ်လ်ကား တစ်ခုကို စတင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ယခုမှန်ချပ်ကြီးများကိုမူ ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၄၅၈)မီတာတွင် ရဟတ်ယာဉ်များ အကူအညီဖြင့် နေရာချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုမှန်ချပ်ကြီးများ တပ်ဆင်သည့် စရိတ်မှာ ဒေါ်လာ (၉)သိန်းနီးပါးမျှ ကျသင့်ခဲ့သည်။ အီတလီတွင်လည်း (၂၀၀၆)ခုနှစ်က အလားတူ ပရောဂျက် တစ်ခုကို အကောင်အထည် ဖော်ဖူးသည်။ ဗီဂါနယ်လာ မြို့လေးသည် ယင်းကို အုပ်မိုးနေသည့် တောင်ထိပ်များပေါ်တွင် အလင်းပြန် မှန်ချပ်များကို တပ်ဆင်ခဲ့ဖူးခြင်းဟု သိရှိရသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွင်မြန်မာဘာသာဖြင့် အမုန်းပွားဖွယ် ကိစ္စရပ်များ ရေးသားနေခြင်းအပေါ် စောင့်ကြည့် ရန်နှင့် ရီပို့ပြုလုပ်ခံရမှုများပါက ယင်းပေ့ခ်ျတစ်ခုလုံးကို ဖျက်သိမ်း ပစ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာစာ တတ်ကျွမ်း သည့် ဝန်ထမ်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှ ခန့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် အိုင်စီတီအဖွဲ့(MIDO)မှ သိရသည်။
အိုင်တီခေတ်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် မြန်မာမှုပြုခြင်း
မြန်မာလို အစအဆုံး သုံးနိုင်သည် ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာ မကြာခဏ တွေ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်း၊ စမတ်ဖုန်းကြော်ငြာတွေမှာ ရေးထားတာပါ။
ဖုန်းတွေထဲ မြန်မာစာစနစ်ကို ထည့်တဲ့ ပထမဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းဟာ JAS ဖြစ်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
အခုဆိုရင် ဒီလမ်းကြောင်းကို လိုက်သူ ရှိလာပါပြီ။
မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲက နောက်ဆုံးပေါ် ဆမ်ဆောင်းဖုန်းတွေမှာလည်း မြန်မာစာစနစ် ထည့်ထားပါတယ်။
မြန်မာစာစနစ် ဆိုတာက ဖောင့်၊ ယူနီကုတ်ထဲ ထည့်တာတခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တယ်လီဖုန်း ဆက်တင် (setting) ထဲ ၀င်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ရာမှာ Wi-Fi, Bluetooth, Storage, Battery, Message, Other, DTS mode စသဖြင့် စသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရများနေရာမှာ မြန်မာဝေါဟာရတွေကို အစားထိုးခြင်းပါ၊ အဲဒါကို မြန်မာစာစနစ် ထည့်ထားတယ်၊ မြန်မာလို အစအဆုံး သုံးနိုင်တယ် လို့ ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်တင်တခုလုံးကို မြန်မာလိုပြောင်းလိုက်ရင် ဘယ်ခလုပ်ထိထိ မြန်မာလိုပဲ ပေါ်လာမယ်။
Wi-Fi, Bluetooth, Battery စသဖြင့် စသဖြင့်သော အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကိုပဲ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ မြန်မာစာစနစ်အတွက် မေးခွန်းတချို့ ပေါ်လာပါတယ် -
တကယ် အသုံးတည့်သလား၊ သုံးကြသလား
ဒီမေးခွန်းတွေထဲက တချို့ အကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ရန်ကုန်မြို့က အိုင်တီဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ ပြောဆို သုံးသပ် ဦးဏှောက်စားခဲ့ကြပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ အပလီကေးရှင်း ဖန်တီးထုတ်လုပ်သူများ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲကို ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ အူရီးဒူးမြန်မာ နဲ့ Myanmar Blogger Society တို့ ပူးတွဲ စီစဉ်ကြတာပါ။
မြန်မာမှုပြုတဲ့အတွေ့အကြုံက မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတာ ကြာပါပြီ။ ပထမဆုံးအလုံးအရင်းနဲ့ မြန်မာမှုပြုတာ သမ္မာကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ခြင်း ဖြစ်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
အိုင်တီခေတ်မှာတော့ ပိုများလာသလိုလို ထင်ရပါတယ်။ အလုံးအရင်းနဲ့ ပြုရတာကတော့ အခုမှ စတင်သလို ဖြစ်လာတယ်။ အိုင်တီနည်းပညာက အရပ်သားတွေထဲ ရောက်လာလို့ပါ။
ကျူရှင်စာအုပ်ထဲထည့်ဖို့ ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ဘဲ လက်ဝါးထဲ ထည့်သုံးမယ့် ဖုန်းလေးအတွက် အကျစ်လျစ်ဆုံး တိုနှံ့နှံ့ အဖြစ်ဆုံး မြန်မာမှုပြုရ ဘာသာပြန်ရတာ ဆိုတော့ အင်မတန် အချိန်ပေးပြီး လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပါ။
အကြိမ်ကြိမ် ပြုပြင်ရမယ်၊ အခုမှ အစပြုတာဆိုတော့ ဒီလို အဆင်မပြေတာတွေ၊ ရယ်စရာတွေ ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ဆိုခဲ့သလိုပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြုပြင်ရမယ်၊ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ လိုကယ်လိုက်ဇေးရှင်း လုပ်ရာမှာ လူတိုင်း လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရဖို့ အဆင့်ဆင့် လုပ်ကြ ပြင်ကြရတာပါပဲ တဲ့။
အခု ဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေကြောင့် နောက်ဆုတ်လို့ မရဘူး၊ တချို့သော ဝေါဟာရတွေကိုတော့ အသံထွက်အတိုင်း မြန်မာမှု ပြုရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
ဥပမာ ...ကား၊ ဂီယာ ဆိုတာတွေကို အသံထွက်အတိုင်း မြန်မာမှု ပြုလိုက်ကြရာမှာ ဟိုတုန်းက ဘယ်လို ဖြစ်မယ် မသိပါ၊ အခုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
တယောက်ကတော့ ထောက်ပြပါတယ် ... ဂီယာ ဆိုတာကို အတိအကျ ဘာသာပြန်လိုက်ရင် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လိုက်နိုင်သော .... ဆိုပြီး အရှည်ကြီး ဖြစ်သွားမယ်။ ဘာသာပြန်ရတာ အခက်အခဲရှိရင် ဒီလို ထားခဲ့ပြီး အသံထွက်အတိုင်း ရေးခဲ့ ခေါ်ခဲ့ကြတာပဲ။ ကားဆိုတာကို အားလုံး နားလည်ကြတယ်၊ မောင်းနေကြတယ်။
အကုန်လုံးကို မြန်မာမှုပြုဖို့ ကြိုးစားရင် အချိန်ဖြုန်းရာရောက်တယ်၊ အချိန်ဖြုန်းလိုက်လို့ ထိရောက်လား ဆိုတော့လည်း မထိရောက်ဘူး
လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာမှုပြုဖို့ရော တကယ် လိုအပ်သလား??
မြန်မာစာစနစ် ထည့်ထားခြင်း မထည့်ထားခြင်းကို ဖုန်းဝယ်သူတွေ တကယ် စိတ်ဝင်စားကြပါ့မလား၊ မြန်မာမှုပြုဖို့ရော တကယ် လိုအပ်သလား ဆိုတာတွေကလည်း မေးစရာ ဖြစ်လာပါပြီ။ ကိုယ့်မိုဘိုင်းဖုန်းထဲက ဆက်တင်တခုလုံးကို မြန်မာလိုပြောင်းလဲတာ ရှိမယ် မထင်ဘူး။
ဧရာဝတီလိုမျိုး မြန်မာဝက်ဆိုက်တွေ၊ ပြီးတော့ လူကြိုက်များတဲ့ Facebook လို လူမှု ကွန်ရက်တွေ ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မြန်မာစာ ပေါ်စေချင်ကြမှာပါ။ အဲဒီစာမျက်နှာတွေမှာ မြန်မာတွေက မြန်မာလိုပဲ ရေးနေကြလို့ပါ။
မိုဘိုင်းတွေ၊ ကွန်ပြူတာပြား တက်ဘလက်တွေထဲ မြန်မာစာစနစ် ထည့်ထားကြသူတွေ ရှိပေမယ့် သူတို့ဟာ အင်္ဂလိပ်စနစ်ပဲ ဆက်သုံးကြတာ များတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တကယ်အသုံးမတည့်ဘူးလို့ ဆိုရမလိုပါပဲ။
စမတ်ဖုန်းတွေ တက်ဘလောက်တွေမှာ မြန်မာစာစနစ်ဆိုတော့ ... မြန်မာလိုတော့ ရေးထားတာပဲ၊ သို့သော်လည်း ရယ်စရာပဲ တွေ့တယ်၊ နားတော့ မလည်ဘူးလို့ ဆိုသူက ဆိုပါလိမ့်မယ်။
တခြားလုပ်ငန်းများလိုပဲ မိုဘိုင်းဖုန်း မြန်မာစာစနစ် အတွက် ဆိုရင်လည်း သုတေသန လုပ်ရပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ တက်ရောက်လာသူတဦး ပြောတာကတော့ မပြည့်စုံသေးတဲ့ မြန်မာစာစနစ် ဆိုသော်လည်း ဈေးကွက်ထဲ ပစ်ချလိုက်တယ်၊ ပြီးမှ အဆင်ပြေအောင် လုပ်စရာရှိတာတွေ ဆက်လုပ်ပါတယ် တဲ့။
ဆမ်ဆောင်းက ပညာရှင်တွေက မြန်မာစာအသုံးအနှုန်း စင်းလုံးမချောနိုင်ဘူး ဆိုတာ သဘောပေါက်တယ်၊ သို့သော်လည်း ဈေးကွက်ထဲ ချရောင်းတယ်၊ ပြီးမှ အသံတွေကို ပြန်နားထောင်တယ်၊ ထောက်ပြတာတွေကို ကြိုက်တယ်၊ လက်ခံမှတ်သားထားတယ်၊ ဖုန်း ၀ယ်သုံးသူတွေက သင့်ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်ရန် ဤနေရာမှ လွှဲရိုက်ပါ ဆိုတာမျိုးလို ဝေါဟာရတွေ အသုံးအနှုန်းတွေကို ထောက်ပြကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို ထောက်ပြတာတွေကြောင့် နောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာအသုံးအနှုန်း ပိုပြီး အဆင်ပြေလာတယ် လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
မြန်မာစာစနစ် ထည့်တယ် ဆိုတာက ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တို့က သူတို့ အကျိုးအမြတ်အတွက် ထည့်ကြတဲ့သဘောပါပဲ။ ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ကို လူတွေ မသုံးချင် သုံးချင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုတခု ပေးတာပဲ မဟုတ်လား။ လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာ မြန်မာစာတွေ ဘာတွေ သွားထည့်ကြတာမျိုး လုပ်စေချင်မယ် မထင်ပါ။
တခြားသူက မြန်မာစာစနစ် ထည့်ကြတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်လည်း လိုက်လုပ်တဲ့ သဘောလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း ဒါရှိပါတယ် ဆိုတာ ပရိသတ်ကို ပြချင်လို့၊ ပြိုင်ဘက်တွေကို အကျော မခံချင်လို့ပါပဲ။
ပထမတော့ ကွန်ပြူတာကီးဘုတ်တွေမှာ ကကြီး ခခွေးတွေကို ABCD တို့နဲ့ တွဲပြီး ထည့်လာတယ်၊
စက်ရုံက ထွက်ကတည်းက အဲဒီလို ထွက်လာတယ်၊ နောက်တော့ စမတ်ဖုန်းကီးဘုတ်တွေမှာ
ကကြီး ခခွေးတွေ ရိုက်လာနိုင်တယ်။ အခုတော့ မြန်မာစာစနစ် ဆိုတာကို ထည့်နေကြပါပြီ။
အိုင်တီလောကထဲက တယောက် မှတ်ချက်ပြုတာကတော့ .... ဒီစနစ် ထည့်လိုက်လို့ ဈေးကွက်မှာ ကိုယ်အနိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ ဖြစ်လာမယ် မဟုတ်ပါဘူး တဲ့။
ဒီတော့ နိဂုံးချုပ် ပြောရရင် ... မြန်မာမှုပြုဖို့က လိုအပ်တယ်၊ သို့သော်လည်း အလောတကြီး လုပ်ဖို့ မလိုဘူး၊ အချိန်ယူပြီးလုပ်ကြ၊ အကြိမ်ကြိမ် ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ကြရမယ့် စီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
သြစီကို ကျောင်းလာတက်တဲ့ အိန္ဒိယ ကျောင်းသားဦးရေ လျော့နည်းလာ
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ပညာသင်ယူနေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကျောင်းသားတချို့ တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ခုအခါမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ လာရောက်ပညာသင်ယူနေတဲ့ ကျောင်းသားဦးရေး သိသိသာသာ လျော့ကျနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၂၄၀၀၀ ကျော်သာ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ပညာသင်ယူနေပြီး ဒါဟာ ခါတိုင်းနှစ်နဲ့ ယှဉ်ရင် ၂၆% လျော့နည်းလာတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ပညာသင်ကြားဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းလာပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေ လာရောက်ပညာသင်ယူမှု များပြားနေပြီး တစ်နှစ်အတွင်း တရုတ် ကျောင်းသား အယောက်ပေါင်း ၅၄၀၀၀ ပညာသင်ယူကြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ကျောင်းသားဦးရေ ၉% များပြားလာတာဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေ သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ယူမှုက ၂.၅% ပိုများလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးအပေါ် ပြည်ပနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေ စိတ်ဝင်စားမှု များပြားတဲ့အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍဟာ သြစတြေးလျ အစိုးရအတွက် အများဆုံး ဝင်ငွေရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ကဏ္ဍ ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၅.၃ ဘီလီယံ လောက်ရှိပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ဝင်ငွေရအောင် အများဆုံး ဖန်တီးပေးတဲ့ တခြားကဏ္ဍတွေကတော့ မိုင်းတွင်းလုပ် ငန်း၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီး သုံးခုတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ အများဆုံး ဖမ်းမိ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးသုံးခုတွင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး အရေးယူနေသည့် အမှုများ အနက် မူးယစ်ဆေးဝါး သယ်ဆောင်နေမှုကြောင့် အရေးယူနေရသည့် ဖြစ်စဉ်မှာ အများဆုံးဖြစ် ကြောင်း လေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ရဲမှူးချုပ်နေ၀င်းက အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် ညနေပိုင်းတွင် Daily Eleven သို့ ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်တို့ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးသုံးခုတွင် လေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သယ်ဆောင်နေမှုများကို အများဆုံး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ အရေးယူနေရပြီး နိုင်ငံခြား ခရီးသည် အချို့ထံမှလည်း ကျည်ဆန်အချို့ သယ်ဆောင်လာမှုများကိုလည်း စစ်ဆေးအရေးယူ နေရ ကြောင်း သိရသည်။
"ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီး သုံးခုမှာ စစ်ဆေးရေး စက်ကိရိယာတွေက အဆင့်အမြင့်ဆုံး ပစ္စည်း တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းလည်း ဒီထက်ကောင်းတာတွေ ပေါ်လာရင်တော့ ထပ်မံဖြည့်စွက်သွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ ဒီလေဆိပ်တွေမှာတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုတွေကို အများဆုံး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ နေရပါတယ်" ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်၊ လေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ရဲမှူးချုပ် နေ၀င်းက ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့သည့် အမှုများအနက် အရေအတွက် အများဆုံး ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ပြည်ပထွက်ခွာဆောင်၌ ဘုရားလမ်း၊ ဆ/ကရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် နေသူ မဖြူဥ၏ ခရီးဆောင် အိတ်အတွင်းမှမြင့်မြင့်ဝေနှင့် ကမ္ဘာစန်း တံဆိပ်ပါ ထိုးမုန့်ဗူးခွံ (၁၈) ဗူးထဲတွင် သိုဝှက်သယ်ဆောင်လာသော စုစုပေါင်း ကျပ် ၂၇၄၁ သိန်းခန့် တန်ဖိုးရှိ WY စာတမ်းပါ ပန်းရောင် စိတ်ကြွဆေးပြား ၅၄၇၂၀ ပြားနှင့် ဆေးပြားအကြေ (၀ ဒသမ ၀၁)ကီလိုဂရမ်၊ PHYU OU အမည်ဖြင့် ပတ်စ်ပို့တစ်စောင်၊ မဖြူဥ အမည်ပါ မှတ်ပုံတင် တစ်ခု၊ ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်-ဒါကာ၊ ဘန်ကောက်-ရန်ကုန် အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ် တစ်စောင်၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀၊ ခေါက်ပိုက်ဆံအိတ် တစ်လုံးနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံးတို့ ကို ဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မီတာခများ တိုးမြှင့်လိုက်သော်လည်း ဓာတ်အားပေးမှု ထူးမခြားနားဆိုပါက စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ ပုဂ္ဂလိကနှင့်သာ လက်တွဲမည်
အစိုးရမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည် ဆိုသော်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အချိန်နှင့် ဓာတ်အား အပြည့်အဝ မပေးနိုင်ပါက ပုဂ္ဂလိက ဓာတ် အားပေးကုမ္ပဏီများနှင့် သာ ချိတ်ဆက်သွားတော့မည် ဖြစ် ကြောင်း စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရသည်။
”ဈေးနှုန်းကတော့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီတက်လာပြီး ဝန်ဆောင်မှု အပိုင်းက တက်မလာဘူး ဆိုရင်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူး” ဟု အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ရှင်တစ်ဦးက ပေါ်ပြူလာ နယူးစ်သို့ ပြောသည်။
ယင်းသို့ ဓာတ်အားခ တိုးမြှင့်လိုက် ခြင်းအပေါ် ဝေဖန်မှု ပြုလိုခြင်းမရှိသော် လည်း လက်ရှိ ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ်နှုန်း နှင့်သာ ဆက်လက်ရရှိနေသည်ဆိုပါက ဈေးနှုန်း တူေ သ်ာလည်း ဓာတ်အားနှုန်း အပြည့်အဝပေးနိုင်မည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများနှင့်သာ ချိတ်ဆက်သွားမည် ဟု လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် ဥက္ကဋ္ဌ ဦး မြတ်သင်းအောင်က ပြောသည်။
ထို့ပြင် စက်မှုဇုန်များအနေနှင့် တစ်ရက်လျှင် နာရီ ၂ဝ ခန့်သာ မီးရရှိ ပြီး ပွင့်လင်းရာသီများတွင် တစ်ရက်လျှင် မီး ၆ နာရီခန့်သာ အစိုးရထံမှ ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
”မီးမလာတော့လည်း မလာလို့၊ လာရင်လည်း မီးအားက မပြည့်ဘူး။ မီးလာလည်း စက်တွေက အဲဒီဗို့အားနဲ့ ရုန်းလို့မရဘူး။ မီးစက်နှိုးရတယ်” ဟု အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ မမြတ်စံဝင်းက ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် စက်မှုဇုန်များအနေ နှင့် ပုဂ္ဂလိက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး ကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ပြင်ဆင် နေကြပြီး လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဌာနအနေနှင့် လည်း ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ များကို ဓာတ် အား ရောင်းချခွင့်ပေးထားပြီး ဖြစ် ကြောင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
သို့သော် ဓာတ်အားခများ တိုးမြှင့် ကောက်ခံပြီးသည်နှင့် ဓာတ်အားပေးချိန် အပြည့်အဝ ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ မရှိ ပေါ်ပြူလာနယူးစ်မှ တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆက် သွယ်မေးမြန်းသည့်အပေါ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့်ကောက်ခံ မည် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အာမခံချက် အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ ပေးထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ၄င်းထုတ်ပြန် ချက်အရ ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် နှင့် ဓာတ်အားဝယ်ယူမှု ကုန်ကျစရိတ် များ တတ်နိုင်သမျှ ကာမိစေရန်အတွက် တိုးမြှင့်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦး အောင်ခိုင်က အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် နေ့တွင် ဖြေကြားသည်။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် နို ဝင်ဘာလမှ စတင်ကာ ဓာတ်အားခများ ပြောင်းလဲကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံ ပိုင်သတင်းစာတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ သည်။ ဓာတ်အားခများကို အိမ်သုံး တစ်ယူနစ်မှ ၁ဝဝ ယူနစ်အထိ ၃၅ ကျပ်နှင့် ၁ဝ၁ ယူနစ်နှင့်အထက်လျှင် ၅ဝ ကျပ်၊ စက်မှုစီးပွားများအတွက် တစ်ယူနစ်မှ ၅ဝဝဝ ယူနစ်အထိ ၁ဝဝ ကျပ်နှင့် ၅ဝဝ၁ ယူနစ်အထက်လျှင် ၁၅ဝ ကျပ်၊ အစိုးရဌာနများတွင် ရုံးသုံး ၅ဝ ကျပ်နှင့် စက်မှုသုံး ၁ဝဝ ကျပ်ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါနှုန်းထားသစ်များကြောင့် စက်မှုဇုန် လုပ်ငန်းများအတွက် ဓာတ် အားခနှုန်းမှာ လက်ရှိထက် နှစ်ဆနီးပါး မြင့်တက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုပိုင်း တွင်စရိတ်စက အပြောင်း အလဲများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း စက်မှုဇုန် လုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့တော်က နာမည်ကျော် Tiananmen ရင်ပြင်မှာ မနေ့တုန်းက SUV ကားတစင်းနဲ့ ၀င်တိုက်မိရာက မီးလောင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ Xinjiang ဒေသက သံသယ ရှိသူ ၂ ယောက်ကို ရဲတွေက လိုက်လံ စုံစမ်းနေပါတယ်။
လူ ၅ ဦးသေဆုံးပြီး ၃၈ ယောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အာဏာ ပိုင်တွေ စုံစမ်းနေသလို၊ လုံခြုံရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်း တ ရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူ Hua Chunying က ဒီကနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အတွင်း မှာပဲ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
လူနာက ဆရာဝန်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သဖြင့် တရုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒပြ
[ Ref-AFP ၊ ပေကျင်း ၊ အောက်တိုဘာ ၂၉ ]
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံ မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် လွန်ခဲ့သောတနင်္လာနေ့တွင် လူနာ တစ်ဦးက ဆရာဝန်သုံးဦးကို တိုက် ခိုက်ခဲ့ခြင်းအပေါ် မကျေနပ်ကြ၍ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဆရာဝန်တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး နှစ် ဦးမှာ ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် ဟု သိရသည်။ လီယန်အန်ကွမ် အမည်ရှိ အသက်၃၃နှစ်အရွယ် လူနာတစ်ဦးသည် အသေးစား နှာခေါင်းခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ပြီး နောက် ရရှိလာသောရလဒ်ကို မကျေမ နပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းလူနာသည် ဆရာဝန် တစ်ဦးကို နား၊ နှာခေါင်းနှင့် လည် မျိုတို့ကို ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး အခြားဆရာဝန်နှစ်ဦးမှာလည်း ၎င်းလူနာ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာအပြင်း အထန်ရရှိခဲ့သည် ဟု သိရသည်။ Zhejiang ပြည် နယ် ဝမ်လင်ဆေးရုံရှိ ဆရာဝန် များနှင့် သူနာပြုဆရာမများသည် အဖြူကုတ်နှင့် အပြာရောင်ခွဲစိတ် မျက်နှာဖုံးများကို ဝတ်ဆင်ဆန္ဒ ပြခဲ့ကြသည်။
အပျိုဖော်ဝင်စ အရွယ် မိန်းကလေးများ ဖတ်စေချင်ပါတယ်
ယင်းသို့အားဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသော အမျိုးသမီးများ ဆိုရာတွင် အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅^၁၆ အထိ ပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်၊ အသက် (၁၂) နှစ်မှ ၁၈ ^ ၁၉ နှစ်အထိ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုတွင် ကလေးငယ်ဘ၀၌ တစ်ကြိမ်၊ ပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်၌ တစ်ကြိမ် ကြီးထွားနှုန်း အမြန်ဆုံးဖြစ်လေ သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤအရွယ်တွင် အာဟာရ ပြည့်ဝသော အစားအစာများကို များများ စားသုံးသင့်ပေသည်။
ထို့အပြင် ဤအရွယ် ပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်တွင် သွေးသားပြောင်းလဲချိန်ဖြစ်၍ သွေးသားနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် သံဓာတ်ပါသော အစား အစာများ၊ ကြီးထွားနှုန်းကို အကောင်းဆုံး မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် ပရိုတင်းဓာတ်နှင့် အင်အားလုံလောက်သော အစားအစာ များကို စားသုံးသင့်ပေသည်။ အထူးသဖြင့် နွားနို့၊ ပဲနို့၊ အသား၊ ငါး၊ ပဲ အမျိုးမျိုးတို့မှာ ကယ်လိုရီနှင့် ပရိုတင်း<ကယ်ဝသော အစာများဖြစ် သဖြင့် အထူးဦးစားပေး စားသုံးသင့်ပေသည်။ ဗီတာမင် (အေ) ဓာတ်သည် မျက်စိအမြင်အားကို ကောင်းစေရုံမျှမက ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှု၊ ကိုယ်တွင်းခုခံမှု စွမ်းအား စသည့်တို့နှင့် ဆက်နွယ်နေကြောင်း သုတေသနပြုချက်များစွာတို့က ထောက်ခံလျက်ရှိကြရာ ပျိုဖော်ဝင်စ အရွယ် တွင် ဗီတာမင် (အေ) ဓာတ် ကြွယ်ဝသော အ၀ါရောင်နှင့် အစိမ့်ရင့်ရောင်ရှိ အသီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ဥပမာ သင်္ဘောသီး၊ မုန်လာဥ၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ရွှေဖရုံသီး) စသည်တို့ကိုလည်း သင့်တင့်စွာ စားသုံးပေးရပေမည်။ ထို့အပြင် ပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်၌ အရိုးကြီးထွားမှုသည် အလွန်အရေး ကြီးလှပေသည်။ အရိုးကြီးထွား ကျစ်လျစ် ပါမှ အရပ်မြင့်လာနိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် အရိုးကြီးထွား ကျစ်လျစ်မှုကို အားပေသည့် ထုံးဓာတ် အလုံ အလောက်ပါ သော အစားအစာများ (ဥပမာ - စိမ်းလန်းသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ) ကိုလည်း လုံလောက်စွာ မှီဝဲပေးသင့်ပေသည်။
ပျိုဖော်ဝင်စအချိန်အရွယ်မှာ ယောက်ျားကလေးဖြစ်က အရပ်ထွက်လာ၊ အသံသြလာသည်။ မိန်းကလေးဖြစ် ပါက တင်ကား၊ ရင်ထွား၊ ခါးသေး စသည်ဖြင့် မိန်းမပုံသဏ္ဍာန် စç ရလာသည်။ ယင်းသို့ ထင်ရှားသော ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ သာမက အခြားသော ပြောင်းလဲမှုများလည်း ရှိကြပေသည်။
ဥပမာ – လည်ပင်းရှိသိုင်းရွိုက်အကြိတ် သည် အပျိုပေါက်ကာလ၌ အနည်းငယ် ပို၍ ကြီးလာသည်။ ယင်းသို့ကြီး လာသဖြင့် သူက ထုတ်လုပ်သော သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်း ပိုများလာသဖြင့် မိန်းကလေးဆိုလျှင် သွက်လက်ဖျတ် လတ်လာကြသည်။ သို့ရာတွင် လှုပ်ရှားတက်ကြွလွန်း၍ အချို့ မိန်းကလေးများ အစားအသောက်နည်းကာ အပျိုပေါက်အရွယ်တွင် ပိန်တတ်လေသည်။ များသောအားဖြင့် ပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်များသည် စားကောင်း သောက်ကောင်းအရွယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်စားကောင်း ခံတွင်းတွေ့တိုင်း စိတ်အလိုလိုက်၍ အစားအစာများကို မကြာခဏ စားသုံးခြင်းမျိုးကို ရှောင်ရပေမည်။ သို့မဟုတ်က အ၀လွန်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ သုတေသနပညာရှင်များက အ၀လွန်ရောဂါရှင်မှာ ပျိုဖော်ဝင်စများကို အများအပြားတွေ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့် ပျိုဖော်ဝင်စ အရွယ်များတွင် ကယ်လိုရီနှင့် ပရိုတင်း ကြွယ်ဝသော နွားနို့၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို မဖြစ်မနေ စားသုံးသင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပျိုဖော်ဝင်စ အရွယ်များ အတွက် တစ်နေ့တာ စားသုံးသင့်သော အာဟာရ အစားအစာများကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
By myanmar dailymail
လူသိနည်း ဆိုပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးဖူးတဲ့ နာနာဘာဝ ၁၀မျိုး
တချို့ သဘာဝလွန် နာနာဘာဝ တွေဟာ လူသိနည်း ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခြောက်ချားစရာ ကောင်း မှု ကတော့ မလျော့နည်း သွားစေ ရပါဘူး။ ကဲလူသိနည်း ဆိုပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးဖူးတဲ့ နာနာ ဘာဝ ၁၀မျိုးကို ဖတ်ကြည့် ပါဦး။
အခုခေတ်မှာ သရဲဝိညာဉ် တွေက popular culture တစ်ရပ်ဖြစ်လို့ လာနေ ပါပြီ။ ဘယ်ရုပ်သံလိုင်း ကိုကြည့်ကြည့် သရဲအကြောင်း၊ ၀ိညာဉ်အကြောင်း အခြေခံတဲ့ TV show တွေကို တွေ့ရမှာပါ။ “Ghost Hunters,” “Ghost Travelers,” “Celebrity Ghost Stories,” “Ghost Hunters Academy” တို့လို မျိုးပေါ့။ တစ်ခါတစ်ခါ ကျတော့ “Ghost Whisperer” နဲ့ “Being Human,” လိုဇာတ်နာနာ လွမ်းစရာ လေး တွေလဲ တစ်ခါတစ်ခါ ပါပါ သေးတယ်။ ဒီပြပွဲ တွေမှာ တွေ့နေကျ သဘာဝ လွန် ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ပူးတာ၊ ခွာတာ၊ အရိပ်တွေ၊ လျှပ်စစ်လိုင်း EVPs တွေ phantoms သရဲတွေ၊ အလင်း ရိပ်ယောင် လူပုံစံတွေ ပါဝင်မှာပါ။ ဒီသရဲဖြစ်စဉ် တွေဟာ ပြောကြ တဲ့သူ များလို့ ယုံကြည် သူတွေကြား ရေပန်းစား လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီသဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်တွေမှာ တခြား ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲ ဖြစ်စဉ် တွေလည်း ရှိနေပါ သေးတယ်။ ကဲလူသိ နည်း တဲ့ သရဲ အမျိုးအစား တွေ အကြောင်း ကြည့်လိုက် ရအောင်။
သရဲတွေက လူပြတ်တဲ့ နေရာမှာ ပိုပြီး ခြောက်လှန့်လေ့ ရှိတာမို့လို့ လူအုပ်ထဲက မိစ္ဆာတွေဟာ ထူးခြားဖြစ်စဉ် တစ်ခုပါ။ ဒီမိစ္ဆာတွေက တစ် နေရာ ထဲမှာ များစွာ ထွက်ပေါ်လာ စေခြင်းဖြင့် သူတို့ အကြောင်း ပြောကြတဲ့၊ လာကြည့် ကြတဲ့ လူစုလူဝေး ဖြစ်အောင် လှုံဆော် ပေးပါ တယ်။ ဘာလို့ သူတို့က လူတွေ လာစေချင်၊ သိစေချင် နေတာလဲ ဆိုတာ ကတော့ ရေရာတဲ့ အဖြေ မရှိသေး ပါဘူး။ သီအိုရီ တွေက တော့ အဲ့ဒီ နေရာ ကနေ စွမ်းအင် တစ်မျိုး ထုတ်လွှတ် တာမို့၊ လူတွေ ဓါတ်ပုံ ဆရာတွေ စိတ်ဝင်စား အောင်လို့ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး တွေးတော ယူဆနေ ကြပါတယ်။ နေရာ တစ်ခုမှာ သာမန် နာနာဘာဝ တွေက ဖလင် တွေထဲမှာ တစ်ခါ လောက်ပဲ ပါလာပေမဲ့ ဒီ crowd demon တွေက နှစ် ကောင်၊ သုံးကောင် လောက် ခနခန ပေါ်လာ တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖလင် တွေမှာ ပါလာ ရင်လဲ သူတို့က ပုံစံတွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်းနေ ပါသေး တယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ လူသာမန် မျက်စိနဲ့ တောင် မမှတ်မိ နိုင်အောင် ပြောင်းလဲ သွားတာပါ။ ဓါတ်ပုံ တစ်ခု မှာတော့ လူ တစ်ယောက်ကို ကိုက်တော့ မလို လုပ်နေတဲ့ မြွေသဏ္ဍန် အသွင်ကို မြင်ရပြီး အဲ့ဒီ ဓါတ်ပုံရဲ့ နောက် တစ်နေရာ မှာတော့ ပွဲကြည့်နေတဲ့ သက်ရှိ လူတွေ ကြား ကွဲပြားနေတဲ့ လူသဏ္ဍန်၊ အရိပ်မည်းမည်း ကိုလဲ မြင်တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီပုံရဲ့ နောက် တစ်နေရာ မှာပဲ ကင်မရာကို ပြန်လှည့် ကြည့်နေတဲ့ မျက်နှာ သဏ္ဍာန်တစ်ခု ကိုလဲ မြင်နိုင်ပါ သေးတယ်။ လူတွေကြားထဲ ပေါ်လာရ ခြင်းဟာ သူတို့ အနေနဲ့ လူတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို လိုချင်တာ မျိုးလဲ ဖြစ်နိုင် ပါသလား။
တိရစ္ဆာန် တွေဟာ အသက်ရှိ စဉ်က မိသားစု အချစ်တော် လေးတွေ ဖြစ်နေပေမဲ့ သေသွား ရင်တော့ လျစ်လျူခြင်း ခံလိုက် ရပါတယ်။ သရဲ လိုက် ကျွမ်းကျင် သူတွေရဲ့ အဆို အရ သူတို့ ကလေး တွေကို တွေ့ရ ပေမဲ့လို့ ဘယ်သူမှ အရေးလုပ် မနေကြပါဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ကို တွေ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ် အများ အပြား ရှိ ပေမဲ့လို့ လူတွေက ကျော်လွား သွားနေ ကြပါတယ်။ 1800 ခုနစ် အစောပိုင်းက John William Bell မိ သားစုရဲ့ စုန်းလိုက် တိုက်ပွဲမှာ ငှက်သရဲ တွေ ပျောက်ကွယ် သွားတဲ့ ခွေးတွေ အကြောင်း မှတ်တမ်း ပြုထား ပါတယ်။ ဒီမှတ်တမ်း အရ ပြောမယ် ဆိုရင် တိရစ္ဆာန် သရဲ လေးတွေ ဟာ သရဲကြီး တွေရဲ့ အဆင် တန်ဆာ တစ်ခု လောက် ပါပဲ။ တိရစ္ဆာန် သရဲတွေက သူတို့ ရှိကြောင်း ပြတဲ့ အခါ အနံ့ တွေ အသံတွေ သာမက ပုံရိပ်တွေ အဖြစ်လဲ ထွက်ပေါ် လာတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြောက်ခံ ရသူတွေ ဟာ မမြင်နိုင်တဲ့ တိရစ္ဆာန် တွေရဲ့ ပျော်ရွှင်သံ ညည်းသံ တွေ နံရံနဲ့ တံခါးကို ကုတ်ခြစ် သံတွေကို ကြားရ ပါတယ်။
vortex တွေက သာမန် လူတွေ မသိနိုင် နားမလည် နိုင်တဲ့ သဘာဝ လွန် ဖြစ်ရပ်ဆန်း တစ်မျိုးပါ။ သူ့ကို မျက်လုံး နဲ့ မမြင် ရပဲ ရုပ်သေ ဓါတ်ပုံ တွေမှာ ပဲ တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီ Vortex ဟာ ရှည်လျားတဲ့ ဆေးပြင်း လိပ်လို သံချောင်းလို ပုံစံ ရှိပြီး ဆံချည်မျှင်လို သွယ်တန်း နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ လေပေါ်မှာ အလင်းတန်း လိုပေါ်လာ တတ်ပါတယ်။ အပူချိန် ကို ပြောင်းလဲ စေလို့ သူတို့ ရှိနေတဲ့ အခါ အခန်းဟာ အေးစက်စက် လေထုနဲ့ လွမ်းမိုး သွားပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို သာမန် orbs ရေငွေ့ စက်လေး တွေနဲ့ မှားနိုင် ပါသေးတယ်။ နှစ်ခုလုံးက လေထု ထဲမှာ ပေါ်လာ တာ မို့လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ vortex က အလုံ ပိတ်ထား တဲ့ အခန်းထဲမှာ တောင်ဖြစ်ပေါ် တာပါ။ သူတို့ကို အိမ်တွေ ထဲမှာ ပဲတွေ့ရလေ့ ရှိတာမို့ အရင် ပိုင်ရှင်တွေ များလားလို့ တွေးစရာပါ။ နောက် တစ်ခုက တခြား ၀ိညာဉ် တွေကို သယ်ဆောင် လာပြီး ကွဲပြားတဲ့ လောက နှစ်ခု ကို ဆက်စပ် ပေးသူ တွေလဲ ဖြစ်နိုင် ပါသေးတယ်။
တစ္ဆေ သဘောင်္ လို့ ခေါ်တဲ့ the Flying Dutchman ဟာ သက်မဲ့ တစ္ဆေတွေ ရဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ ဒီ သဘောင်္ဟာ ၁၇ ရာစုမှာ ပင်လယ်ပျော် တွေကို ထိတ်လန့် ခြောက်ချား စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို သဘောင်္ သား တော်တော် များများရဲ့ ယုံတမ်း စကားလို ကျော်ကြား ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လူတွေက မေ့ပျောက် သွားခဲ့ ပါတယ်။ ဒီ သက်မဲ့ တစ္ဆေတွေက သဘောင်္ တင်မက ကား ရထား ဒါမှမဟုတ် မီးအိမ် ငယ်လေး တစ်ခု တောင် ဖြစ်နိုင် ပါသေးတယ်။ ဒီ တစ္ဆေတွေက အချိန် တစ်ခုထဲ မှာ အေးခဲ ကျန်နေခဲ့ပြီး တစ်နေရာ ထဲမှာ ထပ်ခါ တလဲလဲ မြင်တွေ့ နေရ ပါတယ်။
“Doppelgänger” တွေက တော့ တခြားနဲ့ မတူ တမူထူး ပါတယ်။ ဒီ “Doppelgänger” ဆိုတာ German စကား “double goer” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ တစ္ဆေမျိုး တွေက တစ်နေရာ ထဲမှာ နှစ်ခု နှစ်ကိုယ်ခွဲ တာမို့ ဒီလို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားဖူး သိဖူး ခဲ့သမျှ ထဲမှာတော့ ဒီလို တစ္ဆေမျိုး အစွမ်းမျိုးက သူတို့ တစ်မျိုးမှာပဲ ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။ နောက် ထူးဆန်းတာက ဒီ “Doppelgänger” တစ်စုံ က တစ်ယောက် က အသက်ရှင် နေသူ ဖြစ်နေ တာပါပဲ။ ကိုယ်ပွား တစ္ဆေ ပေါ်တယ်လို့ ပြောရ မှာပေါ့။ ဖြစ်နိုင် တာက ချစ်ခင်ရသူ တစ်ယောက် ကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်သလို ဖြစ်တတ် တာ မျိုးပါ။ ဖြစ်တတ်တဲ့ တစ်မျိုးက အဲ့ဒီ ရုတ် တရက် တွေ့မိလိုက် သလို ဖြစ်သူဟာ တခြား နေရာမှာ သေလု မျောပါး ဒါမှ မဟုတ် သေဆုံးပြီးစ အချိန် ဖြစ်နေ တတ် ပါတယ်။ တစ်ခါ မှာတော့ အမေရိကန် သမ္မတ လင်ကွန်းဟာ လုပ်ကြံ မခံရမှီ သူ့ ပုံစံတူ Doppelgänger ကို မှန်ထဲမှာ တွေ့ခဲ့ ရတယ် ဆိုပါတယ်။ ကဗျာ ဆရာ Percy Bysshe Shelley ကလဲ သူ့ Doppelgänger ကို အိပ်မက်ထဲ မှာမြင်တွေ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ သီအိုရီ တွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝ လွန်နယ်ပယ် ရဲ့ထုံးစံ အတိုင်း အဖြေ ကတော့ တိတိ ကျကျ မရှိ ပါဘူး။ Doppelgänger တွေဟာ လူတွေရဲ့ ကိုယ်စောင့် နတ် ဒါမှ မဟုတ် အနုစား ရုပ်ခန္ဓာ တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး လူတွေရဲ့ အရေးကြီး တဲ့အချိန်မှာ ထွက်ခွာ သတိပေး တာဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
ဂျာမန် တစ်ယောက် သာမဟုတ် ခဲ့ရင် “Kobold” ဆိုတာ ဘာလဲ သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက နာနာဘ၀ပါပဲ။ “Kobold” ဆိုတာ မြန်မာလို မှင်စာလို့ ပြောရမလား မသိ။ ပျော်တတ် နောက်တတ် တဲ့ ၀ိညာဉ် သေးသေး လေးတွေ ကိုခေါ်တာပါ။ သူတို့ နေရာကို ရောက်လာ သူတွေကို အခြေတကျ နေလို့ မရအောင် နှောင့်တတ် ပါတယ်။ သူတို့ဟာ စိတ်ကောင်း ရှိတဲ့ သူမျိုး ရှိသလို စိတ်ပုပ် သူမျိုး လဲရှိ ပါသတဲ့။ အခြေ အနေ ပေါ်မူတည် တတ်ပါ တယ်။ သူတို့ဟာ တိရစ္ဆာန် အသွင် ဒါမှ မဟုတ် မီးလို အရာဝတ္တု အသွင် ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတော့ Gef လို့ခေါ်တဲ့ မြွေပါ သဏ္ဍန် အကောင် လေးက ကျော်ကြား ပါတယ်။ ပုံပြင်က ၁၉၃၁ Dalby မြို့ နားမှာ စပါတယ်။ အဲ့နှစ် September လ တုန်းက Irvings မိသားစု ဟာ သူတို့ရဲ့ လယ်တော အိမ်အနောက် နံရံကို အကောင်လေး တစ်ကောင် ခြစ်နေသံ ကြားပါတယ်။ အဲ့ကနေ တစ်ခါ တစ်ခါ အကောင်သံ လိုလို တစ်ခါ တစ်ခါ ကလေး ငိုသံ လိုလို ကြားရ တတ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ မကြာခင် မှာပဲ အဲ့အကောင်က သူက gef လို့ခေါ်တဲ့ မြွေပါ တစ်ကောင် လို့ မိတ်ဆက် ပါသတဲ့။ ဒီအကောင်က မြေက မွေးတဲ့ ၀ိညာဉ် ပါလို့ သူ့ကို မြင်ရတဲ့ တစ်ဦးတည်း သောသူ ဖြစ်တဲ့ ၁၃နှစ် သမီးလေး Voirrey ကပြောပြ ပါတယ်။ သူမက Gef က ကြွက်ဝါလို အသွင်နဲ့ အမြီး ဖွားဖွား ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။ Gef က Irvings မိသားစု နဲ့ ရင်းနှီးပေမဲ့ ဧည့်သည် တွေကို မကြိုက် ပါဘူး။ သူက လူတွေ ကိုပစ္စည်း တွေနဲ့ ပစ်ပေါက်တာ အိမ်နီးချင်း တွေကို လိုက်ချောင်း တာမျိုး တွေလုပ် ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို အဲ့အချိန် တုန်းက မဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့ ပါဘူး။
Lemurs တွေရဲ့ မူလ အစက ရောမ တွေဆီ ကပါ။ ဒီသရဲ တွေက ရောမတွေ အတွက် အလွန် အရေးပါ ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အမုန်းတွေကို သယ်ဆောင်လို့ လှည့်လည် လျှောက်သွား နေတယ် ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရုတ်တရက် သေဆုံးလို့ ကောင်းကောင်း သဂြိုလ်တာ မခံရ သူတွေက lemurs တွေ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ နောက် တစ်မျိုးက မိသားစုက သူတို့ သေဆုံးမှု ကနေ အကျိုး တစ်စုံ တစ်ရာ မရခဲ့ရင်လဲ ဖြစ်ပါ တယ်တဲ့။ သူတို့ဟာ ဒေါသ တွေနဲ့ လေလွင့် နေတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှောင်နဲ့ မကောင်း တာတွေ ကို သယ်ဆောင် လာတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ သူတို့ကို ရင်ဆိုင် ရမယ် ဆိုတဲ့ အကြောက် တရားက ကြီးမား လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရောမတွေက မေလ ထဲက တစ်ရက်ကို သတ်မှတ်လို့ သူတို့ကို ပွဲလေး လုပ်ပေး ပါတယ်။ ဒါကို Lemuralia လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခုတော့ ရောမ ခေတ် ယုံကြည်မှု တွေကို စွန့်ပယ် လိုက်ကြ ပြီမို့ ကျွန်တော် တို့ စိတ်ထဲက နေသူတို့ တစ်ဖြေးဖြေး ပျောက်ကွယ် သွားပါပြီ။
ကျွန်တော် တို့ဟာ သရဲခြောက်တဲ့ နေရာ တွေကို ရောက်တဲ့ အခါ ပျော့ညံ့ အားနည်း သွားတတ် တယ်ဆိုတာ ကိုစာအုပ် တွေမှာ ဖတ်ဖူး မှာပါ။ ဒါက အီသာ အစုအဝေး ကြောင့် ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒီ သရဲ အမျိုး အစားက တွေ့ရဖို့ ခဲယဉ်း ပါတယ်။ သူတို့မှာ သူများကို ၀င်ပူး နိုင်စွမ်း ရှိပြီး သာမန် နာနာ ဘ၀ တွေနဲ့ မတူ ပါဘူး။ သူတို့ ဟာ အရိပ် တစ္ဆေ အမျိုး အစား ပုံစံ မျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ ၀င်ပူးခါနီး လူတစ်ယောက် ရဲ့စွမ်းအင် ကို ထုတ်ပစ် လိုက်ပြီး မှ အထဲကို ၀င်သွားပါတယ်။ victim ရဲ့ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်း နှစ်ခုလုံးကို အသုံးချ တတ်တာမို့ သူတို့ကို အလွန် အန္တရာယ် ကြီးတဲ့ အမျိုး အစားလို့ သတ်မှတ် ထားပါ တယ်။ ဒါကြောင့် သင်တို့ဟာ အမြဲတစေ ရုပ်သံလိုင်း တွေပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ် မှန် ကိုမတွေ့နိုင်ပါဘူး။
အလွန် ရှားပါးတဲ့ အမျိုး အစားပါ။ လူတော်တော် များများ ကြုံဖူး လောက် စရာ မရှိပါဘူး။ သူက အခွေ တစ်ခုကို ထပ်ကာ တလဲလဲ ပြန်ဖွင့် နေတာနဲ့ တူပါတယ်။ ဖြစ်နေကြ အတိုင်း နေရာ တစ်ခုထဲမှာ ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဖြစ်နေတာ မျိုးပါ။ ဒီလို သရဲ ခြောက်ခံ ရတဲ့ အခါ ရှေး သမိုင်း ဟာ အဲ့ဒီနေ့ တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ပြန်ဖြစ်နေ တတ်ပါ တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက် လို့ ကျော်ကြား ထင်ရှားတဲ့ အဖြစ် ကတော့ “Versailles Time Slip.” လို့ နံမည်ပေး ထားပါတယ်။ ၁၉၀၁ ခုနစ် သြဂုတ်လ မှာ Charlotte Anne Moberly နဲ့ Eleanor Jourdain နှစ်ဦးသား Versailles ကို သွားလည် စဉ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။ ရုတ်တရက်မှာ သူတို့ နှစ်ယောက် လုံးဟာ 18 ရာစု ပါရီက လူတွေ အကြား ရောက်နေတာ ကို အံသြ စရာတွေ့ လိုက်ရတာပါ။ Moberly ဆိုရင် Marie Antoinette က မြက်ခင်း ပေါ်မှာ ထိုင်လို့ ပုံဆွဲ နေတာ ကိုတောင် တွေ့လိုက် ပါသေး သတဲ့။ အဲ့ဒါဟာ အလျင် အမြန် ပေါ်လာပြီး အလျင် အမြန် ပဲပျောက် သွားပါ တော့တယ်။
artificial ghost ကတော့ ၀ိညာဉ် ကမ္ဘာမှာ အရှားပါးဆုံး ကိစ္စပါ။ ဒါက သရဲကို လူတွေက ဖန်တီး တာမျိုးပါ။ သဘော ကတော့ ကလေး တွေဂိမ်း ကစားရင် သူတို့ ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ ကစား သလို မျိုးပါ။ လူအုပ်စု တစ်စု ဟာ တူတူ စုဝေးကြ သရဲကို ဖန်တီးကြ နံမည်ပေးကြ စကား ပြောကြ စတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့ အခါ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆိုင်ရာ ၀ိညာဉ် ဆိုင်ရာ စွမ်းအင်တွေ စုပေါင်း လိုက်ပါ တယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ တော့ သရဲခေါ် ကတ်ပြားလို ပစ္စည်း မျိုးတွေ လိုတတ် ပါတယ်။ အဲ့လို မျိုးနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်ပိုင် သရဲ တစ်ကောင် ရသွားပါ တော့တယ်။ အခုလို ပြောနေတဲ့ အခါ နောက် နေတာ လို့ထင်ချင် ထင်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ပဲ research တွေနဲ့ စမ်းသပ်မှု တွေ လုပ်ထား ပါတယ်။ တစ်ခုသော research ကတော့ Toronto Society အတွက် Psychical Research ပါ။ Conjuring Up Philip: An Adventure in Psychokineses ဆိုပြီး စာအုပ် ထုပ်ဝေ ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဖိလစ် သရဲကို ဘယ်လို ပြုလုပ်ခဲ့ သလဲ ဆိုတာ အတိ အကျ ပါပါတယ်။ ရလဒ် ကတော့ အံ့သြ စရာပါ။ သူတို့ဟာ ဖိလစ်ကို ဖန်တီး နိုင်ရုံ သာမက သရဲ အသစ်တွေ နဲ့ ဘယ်လို ဆက်သွယ် မလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်း တွေနဲ့ လေထဲမှာ ဘယ်လို ဈန်ကြွ မလဲ ဆိုတာ တွေကိုတောင် တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။ Well— that’s what they said. နောက်ပိုင်း မှာ Lilith ကနေဒီ စပိုင် သရဲနဲ့ Sebastian ဆိုတဲ့ အလယ် ခေတ် အဂ္ဂိရတ် ပညာရှင် ကို ဖန်တီးခဲ့ ပါသေးတယ်။
Images from www.dailymail.co.uk , ghoststory, listverse, Source - Listverse
Huawei ဖုန်းကုမ္ပဏီကို သြစီ ဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အပေါ် တရုတ်ဒေါသထွက်
တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ​Huawei ​တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီကို ​သြစတြေးလျအစိုးရက ​သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ​ဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အပေါ် ​တရုတ်အစိုးရက ​ဝေဖန်မှု ​လုပ်လိုက်ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ​အင်တာနက် ​မြန်နှုန်း ​ဒိထက်မက ​မြန်ဆန်ဖို့အတွက် ​အစိုးရက ​ကြိုးစားနေပြီး ​အဲဒီအတွက် ​နိုင်ငံတကာက ​ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို ​ဝင်ခွင့် ​ပေးထားပေမယ့် ​တရုတ်ပိုင် ​ကုမ္ပဏီကို ​ဝင်ခွင့် ​ပိတ်ပင် ​ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် ​လေဘာ ​အစိုးရ ​ခေတ်တုန်းကလည်း ​တရုတ်တယ်လီဖုန်း ​ကုမ္ပဏီကို ​သြစတြေးလျနိုင်ငံထဲ ​ဝင်ခွင့်ပေးရင် ​သြစတြေးလျရဲ့ ​လုံခြုံရေးအတွက် ​စိတ်မချရဘူးဆိုပြီး ​ဝင်ခွင့် ​ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ​တက်လာတဲ့ ​လစ်ဘရယ် ​အစိုးရကပါ ​ထပ်မံ ​ဝင်ခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက် ​တရုတ်အစိုးရက ​အမျက်ဒေါသ ​ထွက်နေပါတယ်။
သြစတြေးလျအစိုးရအနေနဲ့ ​နိုင်ငံတကာ ​ကုမ္ပဏီကို ​ဝင်ခွင့်ပေးထားသလို ​တရုတ်ကုမ္ပဏီကိုလည်း ​စီးပွားရေး ​ပြိုင်ဆိုင်ခွင့် ​ပေးသင့်တဲ့အကြောင်း ​နိုင်ငံရဲ့ ​လုံခြုံရေးကို ​အကြောင်းပြပြီး ​နှစ်နိုင်ငံကြား ​ကုန်သွယ်စီးပွားရေးကို ​ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာမျိုး ​မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ​တရုတ်အစိုးရက ​ပြောလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကလည်း ​အလားတူ ​သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ​လုံခြုံရေးအတွက် ​တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ​Huawei ​ဖုန်း ​ကုမ္ပဏီကို ​နိုင်ငံတွင်းမှာ ​လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့် ​ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
Huawei ​ဖုန်းကုမ္ပဏီကို ​အသုံးချပြီး ​တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ ​ဖုန်းခိုးနားထောင်တာတွေ၊ ​ထောက်လှမ်းမှုတွေ ​လုပ်မှာကို ​စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပေမယ့် ​Huawei ​ကုမ္ပဏီကတော့ ​ဒီလို ​လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုမျိုး ​တခါမှ ​မလုပ်ဖူးတဲ့အကြောင်း ​တုန့်ပြန်ထားပါတယ်။
မကြာခင်မှာ ​သြစတြေးလျနဲ့ ​တရုတ်နိုင်ငံတို့ ​ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ ​ဆွေးနွေးဖို့ရှိပြီး ​ဒီကိစ္စနဲ့ ​ပတ်သက်ပြီး ​ဘယ်လို ​ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ် ​စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
ဒီလို တိုးမြှင့်လိုက်တာ အများပြည်သူနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအပေါ် သက်ရောက်မှာပါ။ ပြည်သူလူထုက အာဏာအပ်နှင်းထားတဲ့ အစိုးရ အနေနဲ့ ပြည်သူကိုတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရအောင် အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ရှင်းပြသင့်ပါတယ် . . . . .
"အခုက အိမ်ငှားခတွေကကြီး၊ အခြား အသုံးစရိတ်တွေပါ လိုက်တက်ရင် ပြည်သူ့ဘ၀က မချောင်လည်ဘူး။ အခုက ပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောတာ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ။ ဘာမှလည်း ဟုတ်တိပတ်တိ ဖြစ်မလာဘူး။ စားဝတ်နေရေးပိုင်း၊ ၀င်ငွေပိုင်း၊ တိုးတက်မှု မရှိတဲ့အပြင် ပိုကျပ်လာသလိုပဲ။ ဒီလိုပုံစံကြီးနဲ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ သွားရမလဲဆိုတာ တွေးတိုင်း ရင်မောနေတယ်။ အပြင်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီစစ်စစ် အစိုးရ မဟုတ်ရင် မလာဘူး။ ပေါ်လစီက အခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုးနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ဘယ်လာချင်မလဲ။ လာပြီး ဖျာခင်းထားတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါ ပကတိ အခြေ အနေပဲ။ ဒါကို ဖုံးကွယ် မထားပါနဲ့။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲ ချင်တယ်ဆိုရင် အရင် လူတွေ စိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့။ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးပါတော့။ နှစ်ငါးဆယ်လုံး ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေကို သနားသော အားဖြင့် ကြိုးဖြေပေးလိုက်ပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်" စာရေးဆရာကောင်းသန့် "သတင်းစာ ထဲမှာ ပါလာတဲ့ မီတာခ တိုးကောက်တဲ့ သတင်းက စိတ်ညစ်စရာပါ။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံက အိမ်နီး ချင်း နိုင်ငံတွေ ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ ထုတ်ရောင်းတာလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး အသိပါ။ အခုလို နိုင်ငံခြား ကို လျှပ်စစ် ထုတ်ရောင်းပြီး နိုင်ငံတွင်းမှာ မီတာခ တိုးကောက်တာက မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ လျော့မကောက် ရင်တောင် မီတာခကို တိုးမကောက်သင့်ပါဘူး။ မီတာခသာ တိုးကောက်တယ် မီးက ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ၂၄ နာရီ မီးအပြည့် မလာတဲ့ နေရာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အခု ဆိုရန်ကုန်မှာ နေထိုင်စားသောက် စရိတ် က အဘက်ဘက် မြင့်တက်နေတယ်။ အဆောင်ခဆိုလည်း မနှစ်ကထက် နှစ်သောင်းလောက် တိုးလာ တယ်။ အခုရတဲ့ လစာထဲက အိမ်ပြန်ပို့ရတဲ့ငွေ ပိုပြီးနည်းလာဖို့ပဲ ရှိတယ်" မမာလာ (ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်း) "ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကတော့ ဖောင်စီးရင်း ရေငတ်နေတာပါဗျာ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ၂၄ နာရီ မပေးနိုင်သေးဘဲ မီတာခကို ဈေးနှုန်းမြှင့်တာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆို တစ်လ မီတာဆောင်ရတာ ၆၀၀၀၀ နဲ့ ၇၀၀၀၀ ကြားမှာ ရှိတယ်။ အိမ်မှာက အ၀တ်လျှော်စက် သုံးတယ်။ အဲကွန်းသုံးတယ်။ ရေခဲသေတ္တာ သုံးတယ်။ ထမင်းချက်တယ်။
ခုလိုမျိုးတိုးတော့ အရင်ကလို သုံးလို့ မဖြစ်တော့ ဘူး။ ချွေတာရမှ ဖြစ်တော့မယ်။ တစ်လကို ဘယ်လိုသုံးသုံး ယူနစ်တစ်ရာတော့ အသာလေး ကျော် တယ်။ မကျော်ချင်ရင်တော့ မိန်းချထားမှပဲ ရမယ်" ကိုမင်းမင်းဦး (မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်) "အိမ်ငှား စရိတ်တွေ တအားတက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ငှားပြီးဖွင့်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ဒုက္ခရောက်ပြီ။ အစ်မတို့က အခု ရုံးခန်းလေးတောင် တစ်လကို တစ်သိန်းကျော် မီတာဆောင်ရတယ်။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ အတွက်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ဆိုင်းဘုတ်မြင်တာနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုပြီး လုပ်ငန်းသုံးလို့ ကောက်တာကတော့ ဘာစီးပွားရေး မှ လုပ်ကိုင်စားလို့ မရဘဲနဲ့ လူတွေအကုန်လုံး ၀န်ထမ်းပဲ လုပ်ကြ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ထောင်မစားနဲ့လို့ ပြောတာနဲ့ တူနေသလိုပဲ။ လုပ်ငန်းသုံး မီတာကို စက်မှုဇုန်တွေမှာ ကောက်တာကို မပြောလိုပါဘူး။ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်တာ မြင်တာနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုပြီး ကောက်တာကတော့ လွန်ပါတယ်။ လူတိုင်းကတော့ ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတော့ တင်ချင်ကြတာပဲ။ အဲလိုလေး တင်မိတာနဲ့ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးထဲ ပို့မယ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဗေဒင်ဆရာတောင်မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံးဆိုပြီးကောက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲ။ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်လိုက်တာနဲ့ ရုံးဖြစ်သွားလို့ လုပ်ငန်းသုံးနဲ့ ပေးရမယ် ဆိုတာကြီးက လုံးဝအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတာ။ ရုံးသေးသေးလေးတွေကအစ စီးပွားရေးမီတာ လိုက်ကောက်တာတော့ အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူး" မနွေ (တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်) "လျှပ်စစ်မီးဈေးနှုန်း သက်သက်သာသာနဲ့ မရရင် ဘယ်တော့မှ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ လျှပ်စစ်မီးကို ၂၅ ကျပ်နဲ့ ပေးတော့မယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ ထွက်လာတယ်။ နေ့ရွှေ့ညရွှေ့နဲ့ ပျောက်သွားတာပါပဲ။ နောက်နှစ်ဆို ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေက ရိုးသွားပြီ။ နောက်နှစ်တွေများ ကုန်ပြီ။
တကယ်တော့ ပြည်သူတွေဟာ မျှော်လင့်ချက် ကြီးစွာနဲ့ အောင့်အီးသည်းခံပြီး တာဝန်ရှိသူတွေ လုပ်သမျှကို ခါးစည်းခံစား နေကြရတာ ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တကယ်တိုးတက် စေချင်ရင် တကယ်လုပ်ဖို့ လိုတယ်။ အပြောနဲ့ မပြီးဘူး။ လက်တွေ့လုပ်ပြရမယ်။ လျှပ်စစ်မီးကိုသာ ကောင်းကောင်းလုပ် မပေးနိုင်ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အခုထက် ဆင်းရဲတွင်း နက်နေဦးမယ်လို့ မြင်ပါတယ်" ဦးသိန်းထွန်း (စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်၊ စစ်တွေ) "တစ်လကုန်တိုင်း ကုန်ကျမယ့် အိမ်လခ စရိတ်တွေက များပြားရတဲ့အထဲ မီတာခက ထပ်ပြီးတော့ တိုးကောက်အုံးမယ်၊ မီတာခတွေက ထပ်ပြီးရင်း ထပ်ပြီးရင်း တက်နေတာတော့ ကုန်ကျစရိတ်တွေမှာ ပိုပြီးအကြပ်အတည်း တွေ့ပြီပေါ့၊ တစ်ခါတလေ ပိုပြီးကောက်တာမျိုးလည်း ရှိတယ်၊ တစ်ရာယူနစ်ကျော်ရင် ငါးဆယ်ဖြစ်ပြီ၊ မီတာခတွေ တိုးကောက်တာမျိုးကတော့ လွန်တာပေါ့။ ကျပ်တည်းနေတဲ့ မိသားစုတွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့" ဒေါ်ပွင့်မော် (ဒေါပုံမြို့နယ်) "အိမ်ခြံမြေဈေး၊ အိမ်လခတွေ၊ မီတာခတွေသာ တက်လာတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းလစာက တက်လာတာ မရှိဘူး။ ဒီကြားထဲ ဘာရီရ စရိတ်တွေပါ တက်လာတော့ ဘယ်လိုမှ ပိုလျှံလောက်ငဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အခု မီတာခက ယူနစ်တစ်ရာကျော်တာနဲ့ တစ်ယူနစ်ကို ကျပ် ၅၀ တောင် ပေးရတော့မှာ။ ယူနစ်တစ်ရာ ဆိုတာက အိမ်တစ်အိမ် အတွက်တော့ ဘယ်လိုပဲ လျှပ်စစ်မီး ခြွေခြွေတာတာသုံးသုံး ကျလောက်တဲ့ ယူနစ်အနေအထားပါ။
အရင်ထဲက မီတာခက သုံးသည်ဖြစ်စေ မသုံးသည်ဖြစ်စေ ရှစ်ထောင်ကျော် ကိုးထောင်နီးပါးလောက် ကျတာ၊ ဒီလောက် ငွေက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူချမ်းသာတွေအတွက် မပြောပလောက်တဲ့ငွေ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လို အခြေခံဝန်ထမ်း မိသားစုများအတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ငွေပမာဏပါ" ဦးခင်ကြိုင် (သာကေတ) "အခုပြောတာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ပိုတိုးကောက်တဲ့ သဘောပေါ့။ တိုးကောက်တော့ သူတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် တက်လာမယ်။ တက်လာတော့ သူ့ပစ္စည်းလည်း ဈေးတက်လာမှာပေါ့။ ဒါလည်း သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ပြည်သူကို ထိမှာပဲလေ။ ဥပမာ အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဆိုပါတော့ အထည်ချုပ် လုပ်သမလေးတွေရဲ့ ၀င်ငွေက တစ်လမှ ၇၀၀၀၀ ကျပ်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်တက်ရင် ၀န်ထမ်းလစာ မတိုးနိုင်ဘူး။ ဒါလည်း ပြည်သူဆီက သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ပြန်ယူသွားတာပါပဲ" အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး "စီးပွားရေးကလည်း အခက်အခဲတွေနဲ့ အကြပ်အတည်းတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရုတ်တရက် မီတာခတွေ တိုးမြှင့်လိုက်တော့ ငွေကုန်ကြေးကျ ပိုများလာတာပေါ့။ အိမ်မှာက သားသမီးတွေရဲ့ ၀န်ထမ်းလစာတွေကလည်း မလောက်ငဘူး။ သွားလာရတဲ့ ခရီးစရိတ်နဲ့တင် လစာကထက်ဝက် ကျိုးနေတာ အခုတော့ မီတာခကပါ ထပ်ပြီးတက်မယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲ ရှိတော့တာပေါ့။ ကုန်ကျမယ့် စရိတ်တွေကသာ ပိုပြီးများလာတယ်၊ ပိုပြီးလျော့သွားတယ် ဆိုတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး" မသူဇာ (ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦး) "မီတာခ တိုးကောက်တာ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ ဘာမှမပြောလောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူအများအတွက်ကို ကြည့်ပြီးတော့မှ မီတာခ တက်တာကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အခုက တိုက်ခန်းငှားတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေတက်တဲ့ ဒုက္ခတွေကို ပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့အပြင် အခုမီတာခပါ တက်တယ်ဆိုတော့ တိုက်ခန်းငှားခတောင် တစ်လတစ်လ အနိုင်နိုင် စုနေရတဲ့သူတွေ အဖို့တော့ ရင်လေးစရာပါပဲ။
နောက်ပိုင်းကျရင် ရန်ကုန်ကိုတက်ပြီး တက်လမ်းရှာမယ့် အခြေခံ လူတန်းစား လူငယ်တွေအဖို့ မလာရဲလောက်အောင် ဖြစ်သွားပါမယ်" ကိုညီနိုင်(ဗဟန်းမြို့နယ်) "အစိုးရက အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်သာကိုင်သာရှိဖို့ ထောက်ပံ့ရမယ့်အစား အခုလိုတွေ လုပ်တာက ရေနစ်သူ ၀ါးကူထိုးသလိုပဲ။ ကောင်းမွန်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ မူဝါဒတွေ မချဘဲ ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုတာမျိုးကတော့ မကောင်းပါဘူး။ ထစ်ကနဲဆို ပြည်သူဆီက တိုးယူတာကြီးက ပြင်သင့်ပါပြီ။ အစိုးရက အရှုံးပေါ်လို့ ပုဂ္ဂလိကကိုလွှဲမှ ပိုဆိုးလာရင် ပြည်သူတွေပဲ ပိုကျပ်တည်းမှာပါ။ ရေမီးဆိုတာ တကယ့်အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေပါ"
အမြန်လမ်းမကြီး ပြွန်ပေါက်အတွင်း တွေ့ရှိရသည့် အမျိုးသမီးအလောင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ရဲစခန်းအသီးသီးသို့ အကူအညီတောင်းခံ
Posted by drmyochit Wednesday, October 30, 2013, under မှုခင်း | No comments
ဖြူး အောက်တိုဘာ ၂၈
ဖြူးမြို့နယ် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၁၉/ ၄) နှင့် (၁၁၉/၅) အကြားြ>ွပန်ပေါက် အမှတ် (၁၂ဝ/၂) အတွင်းဒဏ်ရာ များနှင့် ပုပ်ပွနေသည့် အမျိုးသမီး အလောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမှုမှန် ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် ဖြူးအမြန် လမ်းရဲစခန်းက အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် ရဲစခန်းများသို့ ကူညီစုံစမ်း ပေးနိုင်ရန် အကြောင်းကြားထား ကြောင်း သိရသည်။
အမှုမှာ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲခန့်က အထက် ဖော်ပြပါနေရာတွင် ပုပ်ပွနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အလောင်းကို တွေ့ရှိရကြောင်းသတင်းအရ ဖြူး အမြန်လမ်းရဲစခန်းက တာဝန်ယူ၍ ဒုရဲအုပ်ဝင်းနိုင် ဦးစီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အသိသက်သေများနှင့်အတူ သွား ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အမည်၊ နေရပ် မသိရသော ပုပ်ပွနေသည့် အမျိုးသမီး အလောင်းကို ရင်ညွန့်ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ဝဲလက်မောင်း ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်တို့ဖြင့် သေဆုံးနေ ကြောင်းတွေ့ရပြီး လက် ချောင်း၊ ခြေချောင်းများမှာ ပျက်စီးနေ သည်ကို တွေ့ရသည်။
သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးမှာ အရပ် ၅ ပေ ၃ လက်မခန့်၊ ဆံပင်နက်ပြီး ကျောအထိရှည်လျား၍ နီညိုရောင် အမျိုးသမီးရုပ်ပုံပါ တီရှပ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်ထားသည်။ နီညိုရောင်ဆွယ် တာ၊ ဒူးကပ်ဘောင်းဘီ ဝတ်ဆင်ထား ပြီး အခင်းဖြစ်နေရာဝန်းကျင်မှ မိန်းမ စီးအနက်ရောင် ကတ္တီပါဖိနပ်တစ်ရန် ကိုတွေ့ရှိခဲ့၍ ဖြူးအမြန်လမ်းရဲစခန်း က အမှုဖွင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး မြို့နယ်များရှိ ရဲစခန်းအလိုက် လူပျောက်ဆုံးမှု ရှိ မရှိ ကူညီစုံစမ်း ပေးနိုင်ရန် သတင်းဖြန့်ဝေထား ကြောင်း သိရသည်။
ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်းအတွက် ဂျာမဏီက ယူထားသည့် အကြွေးပြန်ဆ...
ခေတ်သစ်ကျွန်သဘောက် အမည်ရှိ အလုပ်သမားများ အခြေအနေ အ...
စုန်းမအဖြစ် စွပ်စွဲမှုတစ်ခုကို ပါပူအာရဲတပ်ဖွဲ့ အတည်...
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ ကလေး အသေမွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်...
တက်တူးနဲ့ဆေးမှင်သာ သေရင်ကိုယ့်နောက် ပါလာမှာလို့ ထင...
ငိုပြရမည့်အစား အဝတ်အစားများသာ ချွတ်ပြလိုက်မည့် မို...
သြစီကို ကျောင်းလာတက်တဲ့ အိန္ဒိယ ကျောင်းသားဦးရေ လျေ...
Huawei ဖုန်းကုမ္ပဏီကို သြစီ ဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အပေါ် တရု...
အမြန်လမ်းမကြီး ပြွန်ပေါက်အတွင်း တွေ့ရှိရသည့် အမျို...